လကျဆှဲတျော – My Blog
ဘိုတောကျ သညျ ဘကွီးဘုနျးကွီးကွောငျ့ တောမှ မွို့ရောကျခဲ့ရသလို ဘကွီးဘုနျးကွီးရဲ့..ရပျဆှရေပျမြိုး..ဦးလှနျးမောငျဒျေါတငျတငျမွငျ့တို့ဆီမှာ..နခှေငျ့အ လုပျလုပျခှငျ့ ရရှိခဲ့ပွီး လူတလုံး သူတလုံး ဖွဈလာခဲ့ပေ သညျ ။ မိဘမဲ့ တကောငျကွှကျ ဘိုတောကျ သညျ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ကွီးပွငျးခဲ့ရ သညျ ..။ ဘကွီးဘုနျးကွီး က စာသငျပေး သညျ ..။ ဘိုတောကျ သညျ ဉာဏျကောငျး သညျ ။ တထှာပွရငျ တတောငျ မွငျ သညျ .. ။ ပါးနပျ သညျ ..။ထို့ကွောငျ့ ဘကွီး ဘုနျးကွီးက ဒီကလေးကို ရှာမှာဘဲ ..ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာဘဲ မထားလို ..။ တိုးတကျကွီးပှားမဲ့ ကလေး …ဆိုပွီး …မွို့ကိုချေါသှားခဲ့သညျ ။ ဘကွီးဘုနျးကွီး ချေါလို့ ရနျကုနျမွို့ က ဦးလှနျးမောငျ အိမျကို ရောကျတော့ ဘိုတောကျ သညျ သူဌေးအိမျက ဧညျ့ခနျးကွီးက သားရဆေိုဖါကွီးတှေ မှာ မထိုငျရဲ . .။ ကွမျးပွငျမှာဘဲ ထိုငျ သညျ ။ ဦးလှနျးမောငျက ရိုးအပွီးတောကသြော ဘိုတောကျကို ကွညျ့ပွီး သဘောကြ သညျ ။
ဘိုတောကျကို..မငျးဇာတိက..ဘယျကလဲလို့ဦးလှနျးမောငျကမေးတော့..ဘိုတောကျက သူဟာ..မွငျးခွံခရိုငျ နှားထိုးကွီးမွို့နယျ ဝကျလူးရှာကလို့ဖွတောကို ..ဦးလှနျးမောငျက.. မငျးဇာတိ မွို့တှရှောတှေ က မွငျးတှေ နှားတှေ ဝကျတှေ စုံလို့ဘဲ .. ဆိုပွီး သဘောကခြဲ့ပေ သညျ ။ ဘိုတောကျ သညျ အကငျးပါး ဖတျြလပျပွီး တထှာပွရငျ တတောငျမွငျသော လူငယျတယောကျ ဆိုတာ ဦးလှနျးမောငျ သိလာသောအခါ သ ဘောကြ လာ သညျ . .။ဘိုတောကျလဲ ဘကွီးဘုနျးကွီး သငျပေးလို့ မွနျမာစာ ရေးတတျ ဖတျတတျရုံ မက အင်ျဂလိပျစာကို ပါ တျောတျောလေး တီးမိခေါကျမိ သညျ ။ ဦးလှနျးမောငျ အိမျမှာ တျောတျောကွာကွာနပွေီး ဦးလှနျးမောငျ ရဲ့ ပှဲရုံမှာ အလုပျသမားအဖွဈ လုပျခဲ့ရပွီး ဘိုတောကျ သညျ ပှဲရုံက ဆနျဆီ ဆား ငရုပျ ကွကျသှနျတှကေို ဝယျနကြေ ဖေါကျသညျတှေ ကို အပတျစဉျ လစဉျလိုကျပို့ပေးတဲ့ အလုပျကို လုပျရ သညျ ။
ဘိုတောကျ သညျ ရပျကှကျဈေးမြားမှာ ရှိတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျတှကေို ပို့ပေးရသလို..နံမညျကွီးမွနျမာကုလားတရုပျ..ထမငျးဆိုငျ..စားသောကျဆိုငျကွီးတှကေို လဲ ပုံမှနျပို့ပေးရလေ သညျ ။ ဘိုတောကျ တောက ရောကျခါစ ကားမမောငျးတတျခငျက သူဌေးဦးလှနျးမောငျရဲ့ ကားဒရိုငျဘာ ဦးစ က ကားမောငျးပွီး ဘိုတောကျက ကုနျတှကေို ထမျးသယျ ခပြေးပို့ပေး ခဲ့ပွီး ဘိုတောကျ ကားမောငျးလိုငျစငျရပွီး .. ကားမောငျးနိုငျလာသောအခါ ဘိုတောကျတယောကျထဲဘဲ ကားမောငျးပွီး လိုကျပို့လေ သညျ ။ ခမျြးသာနပေမေဲ့ စစေ့ပျသခြောပွီး အလုပျကို အမွဲဂရုစိုကျတဲ့ ဦးလှနျးမောငျ သညျ..တခါတခါသူကိုယျတိုငျ..ဘိုတောကျနဲ့လိုကျပါလရှေိ့ပွီးသူ့ဆီက..အမွဲဝယျယူနေ တဲ့ဖေါကျသညျဆိုငျတှနေဲ့တှဆေုံ့ကာ..သူတို့ဘာလိုလဲ…ဘာဖွဈစခေငျြလဲ..အဆငျပွေ ရဲ့လား ..မေးလရှေိ့ သညျ ။ ဦးလှနျးမောငျသညျလူခဈြလူခငျပေါပွီး..ကုနျသညျမြားကဦးလှနျးမောငျရဲ့..ရိုးသားဖွောငျ့ မတျမှုကွောငျ့ ယုံကွညျလေးစားကွ သညျ ။ တနေ့ ဦးလှနျးမောငျ လိုကျပါလာပွီး ပို့နကြေ ကရာခြီ ဆိုတဲ့ကုလားစားသောကျဆိုငျ ကို ရောကျသောအခါ ဆိုငျရှငျသူဌေး ခြောကျဒရီ ..ရှိနတောကွောငျ့ ဦးလှနျးမောငျ နဲ့ ခြောကျဒရီတို့ တှကွေ့ သညျ ..။
ကုလားသူဌေး ခြောကျဒရီ သညျ ကရာခြီ စားသောကျဆိုငျလို ဆိုငျမြိုး ၃ ဆိုငျကို ပိုငျသူ သူဌေးတယောကျ ဖွဈပွီး သူ့ဆိုငျတှကေို ဘိုတောကျက အပတျစဉျ ကုနျတှပေို့ပေးနရေသညျ..ဦးလှနျးမောငျရဲ့ပှဲရုံကနေ..အမြားဆုံး..ဝယျယူနတေဲ့ဖေါကျ သညျ လဲ ဖွဈလို့ ဦးလှနျးမောငျ နဲ့ ရငျးနှီး ခငျမငျနတော ကွာပွီ …။ ခြောကျဒရီက ဦးလှနျးမောငျကို ခပြါတီ ..အာလူးဟငျး..လဘကျရညျနဲ့ ဧညျ့ခံပွီး ..သူ့အတှကျ အလုပျသမားကောငျးတယောကျ လိုခငျြလို့ ဘိုတောကျလို လူငယျတယောကျလောကျ ရှာပေးဖို့ ပွောလေ သညျ ..။ ဦးလှနျးမောငျလဲ ..ရှာပေးပါမယျ လို့ ခြောကျဒရီကို ပွောခဲ့သညျ .. ။
ထိုစဉျက ဦးလှနျးမောငျ သညျ ကုလားကွီးကို အားနာလို့သာ ရှာပေးမယျ ပွောပမေဲ့ ..သူ့မှာ ဘာအကွံမှ မရှိ ..။ လူကောငျးရဖို့ကလဲ မလှယျဘူး ..။ နောကျ သုံးလခနျ့အကွာမှာ ဦးလှနျးမောငျ ရဲ့ ဇနီး ဒျေါတငျတငျမွငျ့ ဖကျက တျောတဲ့ သိနျးထှနျး ဆိုတဲ့ တူတယောကျ ဦးလှနျးမောငျ အိမျကို .. ရောကျလာ သညျ ..။ ဒျေါတငျတငျမွငျ့က သိနျးထှနျးကို လုပျငနျးနားလညျဖို့ ..ပှဲရုံမှာ အလုပျကူခိုငျး သညျ ။ဘိုတောကျ ကုနျတှေ လိုကျပို့ရငျလဲ သိနျးထှနျး ပါ သညျ .. ။ သိနျးထှနျး အလုပျတှေ နားလညျလာတဲ့အခါ ..ဒျေါတငျတငျမွငျ့ က သိနျးထှနျးက သှေးတျောစပျတဲ့ တူမို့ ပို စိတျခရြတာကွောငျ့ ဘိုတောကျကို လူလိုခငျြနတေဲ့ ခြောကျဒရီ ဆီကို ပေးလိုကျဖို့ ပွော သညျ ..။ ဦးလှနျးမောငျလဲဘိုတောကျကို ကွိုကျပမေဲ့ မိနျးမ ကို မလှနျဆနျနိုငျတာ နဲ့ခြောကျဒရီ ကို ဘိုတောကျကို လိုခငျြလား မေးသညျ ..။
ခြောကျဒရီကလဲ ..သူ့မှာ လူလိုနတောနဲ့ ဘိုတောကျကို ဝမျးသာ အားရ လကျခံ သညျ ..။ ဘိုတောကျ သညျ ဆိုငျ ၃ဆိုငျ အတှကျ လိုအပျတာတှေ မှာဖို့ တာဝနျခံ ဖွဈလာ သညျ . .။ ဦးလှနျးမောငျရဲ့ ပှဲရုံမှသာမက ..အခွား သားငါးတှလေဲ မှာရ ဝယျခွမျးရ သညျ ..။ ဒျေါတငျတငျမွငျ့ရဲ့တူ သိနျးထှနျး ရောကျလာခွငျးဟာ ဘိုတောကျ အတှကျ ကောငျးဖို့ဖွဈလာရသညျ . .။ ကုလားကွီး ခြောကျဒရီ ဆီမှာ ဘိုတောကျ သညျ လကျထောကျမနျနဂြော ဖွဈလာရ သညျ ..။ ကုလားကွီးက ကွာကွာ လုပျလာလေ သူ့ကို စိတျခလြာလေ ဘဲ ..။ ခြောကျဒရီမှာ မွနျမာ နံမညျ ရှိ သညျ .. ။ ဦးခငျမောငျစိနျ ..။ လူတှကေ သူ့ကို ခြောကျဒရီ ဘဲ ချေါကွတာ မြား သညျ ..။ ဘိုတောကျ သညျ ကုလားမြားနဲ့ အလုပျလုပျရတာ ဘာမှ အခကျအခဲမရှိ . .။
ဘာမှလဲ စိတျအနှောကျအယှကျမရှိ ..။ သို့ပမေဲ့သူ့..ရငျထဲမှာခြောကျဒရီရဲ့….တဦးတညျးသောသမီး..ဆိုဖီယာဆိုတဲ့.ကုလားမ ခြောလေး ကွောငျ့ဝဒေနာတရပျကို ခံစား ရ သညျ ..။ ခြောကျဒရီတို့ သညျ အသားဖှေးဖှေးဖွူတဲ့ မဂိုကုလားလို့ မွနျမာမြားက ချေါကွတဲ့ လကျရှိ ပါကစ်စတနျနိုငျငံ မှာနကွေတဲ့ ပထနျကုလား အမြိုးအနှယျ ဖွဈ သညျ .။ခြောကျဒရီ ရဲ့ သမီး ဆိုဖီယာ သညျ ကုလားရုပျရှငျတှထေဲက မငျးသမီးခြော ပရီတီးဇငျတာ ..လို ရုပျမြိုး ..။ဖွူဖှေးတဲ့ အသားအရညျ ..တောကျပွောငျဝိုငျးစကျတဲ့ မကျြလုံး ..နှာတံပျေါပျေါ နှုတျခမျးလုံးလုံးလေးနဲ့ မို့ ဘိုတောကျ သညျ မွငျဘူးစ အခြိနျထဲက ရငျထဲစှဲညိ မတ်ေတာ သကျဝငျ နပေေ သညျ .. ။ ဆိုဖီယာ ကို မွငျတာနဲ့သူ့ ရငျတှကေ ကုလားရုပျရှငျထဲကဘုံသံတှလေိုဒိနျးတပျတပျ … ..ဒိနျးတပျတပျ နဲ့ အခုံမွနျလာတော့ သညျ ။ ဆိုဖီယာ့အလှ က ဘိုတောကျကို ဖမျးစားထား သညျ ။
ဆိုဖီယာ ကို သူ ရရေလေညျလညျသဘောကြ စှဲလနျးနရေပွီ …. ။ ဆိုဖီယာ့ကို သူ စမွငျဘူးတဲ့နေ့ ကို သူ မှတျမိနေ သညျ ။ ဆိုဖီယာ သညျ သူ အလုပျ စ ဝငျနတေဲ့ ကရာခြီစားသောကျဆိုငျ..ကို..သူ့အဖပေေးခိုငျးလိုကျတဲ့ ..ငှထေုပျ လာပို့တော့ သူက ကားအနား သှားယူ သညျ . .။ ဆိုဖီယာက .. ယူက ..ဒကျဒီ့ တပညျ့အသဈ ဘိုတောကျ ဆိုတာလား .. ဒို့က ဆိုဖီယာ …ဒီမှာ ဒကျဒီပေးလိုကျတဲက ပိုကျဆံထုပျ . . ဆိုပွီး ငှထေုပျလှမျးပေးသညျ ..။အဲဒီတုံးက ဘိုတောကျ သညျ ဆိုဖီယာ့ အလှမှာ မိနျးမောနေ သညျ . .။ ငေးနသေညျ ..။
အာပါး . .လှလိုကျတဲ့ ကောငျမလေး . .။ ခြောကျဒရီလို ထိပျပွောငျပွောငျ ဘိုကျပူပူ ..နှုတျခမျးမှေးထူထူ နဲ့ကုလားကွီးမှာ ဒီလောကျ ခြောလှတဲ့ သမီး ရှိနတော အံ့သွ စရာဘဲ . .။ ဟိတျ..ဘာငိုငျနတောလဲ..ကွောငျတောငျတောငျ နဲ့ . . ဆိုဖီယာက မကျြစောငျးလေး ထိုး ပွီး ပွော သညျ . .။ နှုတျခမျးလေး စူပွီး စကားပွောနပေုံက ကုလားကားတှေ ထဲက မငျးသမီးလေးတှေ ရဲ့ အမူအရာ နဲ့ တူနသေညျ ။ဆိုဖီယာ့ အသားအရေ သညိ နို့နှဈရောငျလို့ ချေါမလား . .။ ဖွူဝငျးပွီး နုခြောနသေညျ ..။ . .လကျဖြံနဲ့..လကျမောငျးမှာအမှေးနုစိမျးဖနျ့ဖနျ့လေးတှေ ကို တှရေ့ သညျ ။ ဆိုဖီယာ သညျ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပွီး အားကစား လုပျသူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ ဘိုတောကျ သူတို့ အိမျမှ အလုပျရှိလို့ သှားတဲ့အခါတှမှော ဆိုဖီယာ့ကို အသားကပျ ဘောငျးဘီ ..ကပျြထုပျနတေဲ့ တီရှပျတှနေဲ့ တှရေ့တတျလို့ .. ဆိုဖီယာ ရဲ့ ကိုယျလုံးအလှကို သူ တိတျတခိုး စှဲလနျးနမေိရပေ သညျ ။
ဆိုဖီယာ လမျးလြောကျ ရငျ အနောကျဖကျကနေ မွငျရတဲ့ဆိုဖီယာ ရဲ့ တငျသားတှေ တုနျခါ လှုပျရမျးတာ ကို ဘိုတောကျ ကွညျ့ပွီး ..စိတျတှေ မရိုးမရှ ဖွဈ ရ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ သညျ ကျောဇောပြံ ခောတျက မဂို မငျးသမီးလေး လိုဘဲ ခြော သညျ . .။ဘိုတောကျ သညျ တဏှာစိတျကွှသောအခါမြားမှာ ..သူ့ လီးကို ကှငျးတိုကျခါ စိတျဖွလေေ့ ရှိ သညျ .. ။ မိနျးမပကျြမြား ….ပွညျ့တနျဆာ ဖါမြား ဆီကို မသှား ..။ ဆိုးဝါးလှသော အအေိုငျဒီအကျဈ ရောဂါ ကို သူ အလှနျ ကွောကျ သညျ ။ ထိုကဲ့သို့ ကှငျးတိုကျသောအခါ ဆိုဖီယာ သညျ သူ့စိတျကူးထဲက မငျးသမီးကလေး ဖွဈ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ သညျ မဂိုဘုရငျကွီး ရဲ့ သမီးတျောလေး ဖွဈပွီး သူ သညျ သကျတျောစောငျ့ ကိုယျရံတျော ပေါ့ . .။ ဘိုတောကျ သညျ ဂြီးမြား သူ မဟုတျတာကွောငျ့ အစားလဲ ဘာနဲ့ .. စားစား ရ သညျ ..။ဝကျသားမစားရလို့လဲ ဘာမှ မဖွဈ ..။စားသောကျဆိုငျ လုပျငနျးမို့ သူ သညျ မနကျ ည ဘာမှ စားဖို့သောကျဖို့ မပူရ …။
ခြောကျဒရီ ပေးတဲ့ လစာ သညျ အသားတငျ စုမိ သညျ ။ ဦးလှနျးမောငျ ဆီမှာ နရေတုံးကထကျ ပို အဆငျပွလေေ သညျ . .။ ဘိုတောကျ သညျ တောက လာတုံးကနဲ့တခွားစီ ဖွဈလာ သညျ . .။ ရနျကုနျရညျ လညျလာသညျ သာမက အလကားမနဘေဲ …ညတိုငျးလဲ စာဖတျ.. . .မသိတာ မတတျတာ လလေ့ာခဲ့တာမို့ ..ဘိုတောကျ သညျ အရငျတုံးက တောသား ငအ မဟုတျတော့ .. ။ ကုလားစကားလဲ ..မှတျနအေောငျ..ပွောဆိုလာနိုငျ သညျ ..။ ဘိုတောကျ သညျ ခြောကျဒရီ ရဲ့ အိမျကို အမွဲ ဝငျထှကျနရေ သညျ . .။ ခြောကျဒရီ ရဲ့ စီးပှါးရေးလုပျငနျးမြားသာမကခြောကျဒရီရဲ့ဇနီးမယား ..ဒျေါဘီဘီ နဲ့ ဆိုဖီယာတို့ကိုလဲ ကူညီရ သညျ ..။ ခြောကျဒရီ့ အိမျ မှာ ..သူ့ ကားလဲ ဆေးပေးရ သလို ..အိမျမှာဆေးသုတျစရာလိုလဲ သုတျ ..မွကျရိပျစရာရှိလဲ ရိပျရ သညျ ….။
အီစှတျ ဆိုသော ကားဒရိုငျဘာ ရှိနပေမေဲ့ အီစှတျကို အဖိုးကွီး ချေါခိုငျးထားသောအခါမြားမှာ ……ဘိုတောကျ သညျ ဘီဘီ သှားလိုရာကို ကားမောငျးပို့ပေးရတတျ သညျ ..။ ဘီဘီ သညျ ဖငျပေါ့သော ဘိုတောကျ ကို ခိုငျးရတာ သဘောကြ သညျ . .။ ဘိုတောကျ ကို ပဲဟငျး . .အာလူးဟငျး ..ဆိတျသားဟငျး ခကျြနညျးတှေ သငျပေးပွီး ထမငျးခကျြ ဒျေါဇီ မရှိတဲ့ ရကျတှေ ဆိုရငျ ဘိုတောကျကို ခကျြခိုငျး တတျ သညျ ..။ ဘီဘီ ရဲ့ စှငျ့ကားတဲ့ ဖငျတှေ ကိုလဲ ဘိုတောကျ ခိုးခိုးကွညျ့မိရ သညျ .။ ဘီဘီ သညျ ဘိုတောကျ ရှေ့ ခဏခဏ ထမိနျ ပွငျဝတျတတျရာ သူမ သညျ အိမျမှာ နရေငျးဆိုလြှငျ အောကျခံ ဘောငျးဘီ မဝတျတတျတာမို့ ဘီဘီ ရဲ့ စောကျဖုတျမို့မို့ကွီးကို ဖတျြကနဲဖတျြကနဲ ..ဘိုတောကျ မွငျတှရေ့ တတျ သညျ ..။
ဘီဘီ ရဲ့ စောကျဖုတျကွီး သညျ အမှေး ရိပျထားပုံရ သညျ . .။ ပွောငျရှငျးနသေညျ …။ ဝငျးဖွူလှနျးသော သူမ အသားအရကွေောငျ့ ..သူမ ဖငျဖွူဖွူဖှေးဖှေးကွီးတှကေို ဘိုတောကျ မွငျရသောအခါ ..ဒီဖငျကွီးတှကေို ကောငျးကောငျး ကိုငျတှယျ ဆုတျနယျလိုကျခငျြစိတျတှေ တဖှါးဖှါး ပျေါပေါကျရပေ သညျ ..။ ဘီဘီ သညျ ခြောကျဒရီထကျ အသကျအမြားကွီးငယျ သညျ ..။ ဘီဘီ သညျ လဲ ရုပျခြောခြော ..ကိုယျလုံးလှလှ မဂို ကုလားမ တယောကျ ဖွဈသညျ ဘီဘီ ခြောလို့ သူမ သမီး ဆိုဖီယာက အမနေဲ့တူပွီး ဒီလို အလှပိုငျရှငျလေး ဖွဈရ သညျလို့ လူတှကေ ပွောဆိုကွ သညျ . . ။ ဘီဘီ ကွောငျ့ ဘိုတောကျ ခဏခဏ လီးတောငျကာ စိတျတှေ ထရ သညျ ..။တခါတလေ ဘီဘီ သညျ မီးဖိုထဲ သူ့ကို လာကူခိုငျးရာ သူမ အောကျစ .. လှတျတာကို တှရေ့သောအခါမြားမှာ အမှေး ပွောငျအောငျ ရှငျးထားတဲ့ ဘီဘီရဲ့ စောကျဖုတျကွီး ကွောငျ့ ဘိုတောကျရဲ့ စိတျတှေ ဖေါကျပွနျကာ ဘီဘီ့ကို တကျလိုးပဈလိုကျခငျြစိတျတှပေျေါပေါကျရလသေညျ.။.
ကိုယျ့အလုပျရှငျရဲ့မိနျးမဖွဈတာ ကွောငျ့မကောငျးတတျတာရယျ…သဘောမတူဘဲအျောလိုကျရငျ..ထောငျထဲရောကျသှား နိုငျတာရယျကွောငျ့ မသိခငျြယောငျဆောငျ ကာ နခေဲ့ရပေ သညျ ။ ခြောကျဒရီ နဲ့ ဦးလှနျးမောငျ ထပျတှကွေ့တော့ . .ခြောကျဒရီ က ဘိုတောကျ ကိုရတာ ကံကောငျးကွောငျး ..သဘောကကြွောငျး ..ဦးလှနျးမောငျကို ပွော သညျ ။ ဦးလှနျးမောငျ က ဘိုတောကျ သညျ လူကောငျး ဖွဈကွောငျး ကွားရလို့ ဝမျးသာကွောငျး ပွောလေ သညျ …။ ဘိုတောကျ သညျ ခြောကျဒရီ ရဲ့ ဆိုငျသုံးဆိုငျအနကျ က တဆိုငျ ဖွဈတဲ့ .. လာဟော စားသောကျဆိုငျ မှာ စာရငျးအငျးမြား လုပျနခေိုကျ . .ခြောကျဒရီ ဆီက ဖုနျးလာ သညျ ..။
ခြောကျဒရီ နဲ့ ဖါတမာ သညျ ပဲခူးမှာ ရောကျနလေို့ သူတို့ အိမျကို ပွနျပွီး သမီး ဆိုဖီယာ့ ကို ကြူရှငျ ပို့ခိုငျး သညျ .။ ဒရိုငျဘာ အီစှတျ သညျ ခြောကျဒရီတို့နဲ့ ပါသှားလို့ ဖွဈသညျ ။ ခြောကျဒရီ မိသားစု သညျ ဘိုတောကျကို ခိုငျးခငျြရာ ခိုငျး သညျ ..။ သူတို့ ခိုငျးပိုငျသညျ လို့ ထငျကွ သညျ ..။ ဘိုတောကျကလဲ ဘာခိုငျးခိုငျး လုပျ သညျ မို့ ကုလားမိသားစု နဲ့ ကိုကျနေ သညျ .။ ဘိုတောကျလဲ ဆိုဖီယာနဲ့ တှရေ့မှာမို့ အထူး ဝမျးသာ သဘောကပြွီး ခြောကျဒရီ ရဲ့ လုပျငနျးသုံး ..တိုယိုတာ ဟိုငျးလပျဈ ကားကွီး နဲ့ခြောကျဒရီနတေဲ့ ဘောကျထျော ကို အမွနျ ပွေး သညျ ။ ခြောကျဒရီ သညျ ဘောကျထျော မှာ ခွံကယျြကယျြ နဲ့ ကွီးမားတဲ့ တိုကျကွီးနဲ့နေ သညျ ..။
သူ ရောကျသှားတော့ ..အိမျကွီး ရဲ့ လူချေါခေါငျးလောငျးကို နှိပျပမေဲ့ ဘယျသူမှ တံခါးလာမဖှငျ့လို့ ..သူ့ကိုပေးထားတဲ့အိမျသော့အပိုနဲ့ ဖှငျ့ဝငျလိုကျ သညျ ။ ထမငျးခကျြ ဒျေါဇီ လဲ မတှေ့ …။ ဘိုတောကျ .. ဆိုဖီယာ..ဆိုဖီယာ .. လို့ အျောချေါကွညျ့တော့လဲ ..ဘာသံမှမကွားလို့အိမျအပျေါထပျကို..တကျသှားလိုကျ သညျ …။ အပျေါထပျရောကျတော့ ဆိုဖီယာ ရဲ့ အခနျးဘကျ က ရကေသြံတှေ ကွားရ သညျ ..။ သူမအခနျးတံခါး က ခပျဟဟ ဖွဈနပွေီး ပိတျမထားလို့ အထဲကို ကွညျ့မိလိုကျတော့ ..ဆိုဖီယာ့ ရခြေိုးခနျး သညျ အိပျခနျး ထဲမှာ ရှိနသေညျ ..။ ရခြေိုးခနျးထဲက ရကေသြံတှေ ကွားရ သညျ . .။ဆိုဖီယာရခြေိုးနေ တာဘဲ . .။ ဒါကွောငျ့ လူချေါခေါငျးလောငျးကိုရော ..အျောချေါနတောကိုရော မကွားတာ ဖွဈမညျ။ ရခြေိုးခနျးတံခါးကတော့ ပိတျထား သညျ ..။
ဘိုတောကျ သညျ ဆိုဖီယာ သညျ ကိုယျတုံးလုံး ခြိုးနမှော ၁၀၀ ရာခိုငျနှုံး . သခြောသလောကျ ဖွဈနတောကွောငျ့ ..ဖွူဝငျးတောငျ့တငျးတဲ့ ဆိုဖီယာ့ ကိုယျလုံးလေး ကို အ ဝတျမပါဘဲ မွငျခငျြတဲ့ စိတျတှေ တဖှါးဖှါး ပျေါပေါကျလာရ သညျ . .။ အကယျလို့ သှားခြောငျးတာ မိလိုကျရငျလဲ အလုပျလဲ ပွုတျ .. နံမညျလဲပကျြ. မညျ . ။.အခနျ့မသငျ့ရငျ ထောငျနနျးစံရအုံးမညျ ။ ခြီတုံခတြုံ ဖွဈကာ ဆိုဖီယာ့ အခနျးပေါကျဝမှာ တှတှေကွေီး ရပျနမေိ သညျ ..။ သညျအခြိနျ မှာ ဗွုံးကနဲ ဆိုဖီယာ့ ရခြေိုးခနျးတံခါးပှငျ့လာသညျ ..။ အို . . . ဟယျ . . . ဆိုဖီယာ သညျ ရုတျတရကျ ရခြေိုးခနျးထဲက ထှကျလာ သညျ ။ သူမ သညျ မကျြနှာသုတျပုဝါ နဲ့ရသေုတျရငျး ..ထှကျလာသညျ ။ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈလို့ ဘိုတောကျ သညျ ဆိုဖီယာ ရဲ့ ကိုယျ ရှခွေ့မျးတခုလုံးကို တှလေို့ကျရ သညျ …။ ဆိုဖီယာ့ ကော့ထောငျဖီးထ..ဝငျးမှတျနတေဲ့နို့တှကေအပွေးကလေး..ထှကျလာလို့..တုနျခါနေ ကွ သညျ …။
ပေါငျတနျရှညျ ဖှေးဖှေး ဖွူဖွူ ကွား ဆီးခုံ ဖေါငျးဖေါငျး မို့မို့ကွီးက အမှေးအမွငျ မရှိ …။ ရှငျးနေ သညျ . .။ဖေါငျးဖေါငျးအိအိ စောကျဖုတျကွီး သညျ အလယျခေါငျမှာ နီညိုညို အကှဲကွောငျးကွီး နဲ့ . .။ ဆိုဖီယာလဲ ဘိုတောကျကို တှတေ့ော့ ရှကျလနျ့တကွား အနောကျကို ပွနျလှညျ့ကာ..လာရာရခြေိုးခနျးထဲ ပွနျ ဝငျပွေး သညျ . . .။တုနျခါ လှုပျရမျးသှားတဲ့ ဆိုဖီယာရဲ့ ဖငျတုံးတှကေ ဘိုတောကျ စိတျတှကေို ဝုနျးကနဲ ထကွှသှားစေ သညျ ..။ ဆိုဖီယာ့နောကျကို ပွေးဝငျ လိုကျသှားမိ တော့ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ သညျ ရခြေိုးခနျး တံခါးကို အမွနျ ပိတျဖို့ ကွိုးစားပမေဲ့ ဘိုတောကျ က ဆိုဖီယာ့ အနားကို ရောကျနပွေီ …။ ဟိတျ..ဘိုတောကျ . .ထှကျ..ထှကျ . ..ဘာလုပျတာလဲ . . ဆိုဖီယာ သညျ ဘိုတောကျ ရဲ့ပေါငျကွား လုံခညျြအောကျက ထောငျထနသေော အတနျကွီးကို တှသှေ့ား သညျ ။ ဘိုတောကျ ရဲ့ လီးကွီး မတျမတျတောငျနေ သညျ . ..။
ဆိုဖီယာက ဘိုတောကျကို တှနျး ထုတျ သညျ . . .။ နပေါအုံး..ဆိုဖီယာ ရယျ . .နပေါအုံး . . သှား . .နငျ..နငျ…မကောငျးဘူး . . .ခု ထှကျသှား . . ဘိုတောကျ သညျ ကာမဘီလူး စီးနပွေီ . .။ မရတော့ . .။ မုနျယိုနသေော ဟိုငျးဆငျကွီးတကောငျ လို . .ဆိုဖီယာ့ကို အတငျး ဝငျဖကျ လပွေီ ။ ဆိုဖီယာ့ ကိုယျပျေါ လှမျးထားတဲ့ မကျြနှာသုတျပုဝါလေးကို ဘိုတောကျ တအားဆှဲယူလိုကျ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ့ ကိုယျပျေါမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ ..။ဖွူ ဖှေး အခြိုးကသြော ဆိုဖီယာရဲ့ အတှငျးပစ်စညျးတှေ အားလုံးကို ဘိုတောကျ မွငျရတော့ စိတျတှေ မထိနျးနိုငျတော့ပါ . . ။ ဆိုဖယာရဲ့ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျလုံးလေးကို ဘိုတောကျ ဆှဲဖကျ ကာ သူမ ရဲ့ နှုတျခမျးထူပွဲပွဲလေးကို သူ့နှုတျခမျးကွီး နဲ့ငုံစုတျလိုကျသလို သူ့လကျတှကေ ဆိုဖီယာ့ ဖငျတုံးအိအိကွီးတှကေို ကိုငျညှဈ နမေိပွီ ..။
အို . .ဟငျ့ဟငျ့ . .ဘိုတောကျ . ..သိပျဆိုးတာဘဲ . .ပါပါ နဲ့တိုငျလိုကျရမလား . . ဘာတှလောလုပျနတောလဲ . . . ဆိုဖီယာကို စှဲလနျးနတော ကွာပါပွီ . .ဆိုဖီယာကို ကနြျော သိပျ ခဈြမိနတေယျ . . ခဈြတာ နဲ့ ဒီလိုလုပျ ရသလား . . ဘိုတောကျက ဘာမှ ပါးစပျက ပွနျမပွောဘဲ အလုပျနဲ့ သကျသပွေတော့သညျ . .။ ဆိုဖီယာကို ရခြေိုးခနျးထဲကနေ အိပျခနျးထဲ ကို ချေါဆောငျသှား လေ သညျ . .။
ဟဲ့..ဘိုတောကျ . .ငါ့ကို ကုတငျပျေါတငျပွီး ဘာလုပျမလို့လဲ . . . ခဈြမလို့ . .ဆိုဖီယာ့ကို ခဈြမလို့ … ဆိုဖီယာ့ နို့တှကေ ဖှံ့ဖွိုးပွီး ကော့နေ သညျ ..။ နို့သီးလေးတှကေ ပနျးနုရောငျ …။ အို..ဟဲ့ . . .ဟာ…အာ . .နို့တှကေို ဘာလို့လာစို့နပွေနျတာလဲ . .. အို . .ဘိုတောကျ . ..အငျ….အငျ…အ….အ…..ရှီး…အား…..ရှီး .. . .. . . ဆိုဖီယာ့ နို့သီးနီညိုညိုလေးတှကေို တဖကျပွီးတဖကျ စို့နတေောက ဆိုဖီယာ ခါးလေးကော့ကာ မကျြတောငျတှေ စငျးကသြှားရ သညျ .. ။သူမ ပေါငျတနျသှယျ နှဈဖကျကို ဘိုတောကျက ဆှဲဖွဲကား လိုကျတာကိုလဲ သိနပေမေဲ့ ဆိုဖီယာ .. မတားဆီးတော့ပေ . .. ။ တအငျးအငျး နဲ့ဘဲ ညညျးနေ သညျ …။ ခဈြတယျ ဆိုဖီယာရယျ . . .အရမျး ခဈြတယျ . .ဆိုဖီယာ မကျြလုံး စုံပိတျထား ခြိနျ ဘိုတောကျ သညျ ဆိုဖီယာ ရဲ့ ပေါငျကွားကို မကျြနှာအပျပွီး သူမ ရဲ့ အမှေးမရှိဘဲ ပွောငျဝငျးနတေဲ့ စောကျပတျဖေါငျးဖေါငျးကွီးကို အငမျးမရဘဲ နမျးပါတော့ သညျ .။
“ အို…ဟငျ့…..ဘို…ဘိုတောကျ…ဘာ…ဘာတှေ လုပျနတောလဲ . . .” ဘိုတောကျက ဘာမှပွနျဖွမှော မဟုတျ ..။ သဲသဲမဲမဲ . .နမျးရှုံ့နေ သညျ . .။ဆိုဖီယာ ..ထှနျ့ထှနျ့လူးနေ သညျ . .။ တဆတျဆတျ တုနျခါနသေညျ . .။ ဘိုတောကျ ရဲ့ အနမျးအယကျအစုတျတှကွေောငျ့ ဆိုဖီယာ .ဖငျကွီးတှေ ဘယျညာရမျးခါနရေပွီ . .။ စောကျပတျ ယကျနစေဉျ ဘိုတောကျ လကျနှဈဖကျက ဆိုဖီယာ့ ဖငျတုံးတှကေို ဆုတျနယျလိုကျ ..နို့ကွီးတှကေို ပှတျသပျလိုကျ နဲ့ အလုပျမြားနေ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ မှာ ဘိုတောကျ ရဲ့ ဆှနတောတှကွေောငျ့ စောကျပတျထဲ ယားသထကျယားလာရ သညျ . .။ ဘိုတောကျ ရယျ . .ဘာတှေ နှိပျစကျနတောလဲဟာ . . . နှိပျစကျတာ မဟုတျဘူး …ဆိုဖီယာ့ကို ကောငျးအောငျ လုပျပေးနတော . . အရမျး အနရေ ခကျနပွေီ . . ဘိုတောကျ လဲ ဆိုဖီယာ အရမျး ယားနပွေီ ဆိုတာ သဘောပေါကျသှားပွီး ဆိုဖီယာ့ ပေါငျကွားမှာ နရော ဝငျယူလိုကျပွီး သူမ ပေါငျတနျတှကေို ဘေးတဖကျတခကျြကို တှနျးခှဲကာ ဖွဲလိုကျ ပွီး သူ့လီးဒဈပွဲကွီးကို သူမ စောကျပတျအပေါကျမှာ တလေို့ကျ သညျ . .။
ဆိုဖီယာ ရဲ့ စောကျပတျကွီးမှာ စောကျရတှေေ နဲ့ စိုစိုရှဲ နသေညျ မို့ ဘိုတောကျ လီးထိုးသှငျးလိုကျသောအခါ . .တငျးကနဲ ဒဈခေါငျးမွုပျရုံ ဝငျသှားပမေဲ့ လီးအတေါ့အကွုံမရှိသေးတဲ့ ဆိုဖီယာကတော့ ကွောကျလနျ့ပွီး ..ဘိုတောကျ ရငျဘတျကို တှနျးလိုကျသညျ ။ အား . . ..ဖွေးဖွေး . .ကွောကျတယျ. . . ဘိုတောကျ က တော့ ဆိုဖီယာ့ နို့တှကေို ဟတျငုံလိုကျပွီး စို့နေ သညျ . .။ သူ့ လီးမဲမဲကွီး သညျ ဆိုဖီယာ့ စောကျပတျထဲ အတငျးကွီး တိုး ဝငျနသေညျ . .။ တအငျအငျ…ညညျးငွူရငျး …ဆိုဖီယာ သညျ ဒါကွီး သူမ စောကျပတျထဲ .. ထိုးတာကိုလဲ ကနြေပျသဘောကနြပေေ သညျ . .။
အပြိုပေါကျဘဝထဲက စိတျကူးယဉျ စိတျမှနျး နဲ့ လကျဝါးစောငျးနဲ့ ပှတျတိုကျလိုကျ . .ခဲတံတုတျတုတျကွီးနဲ့ ထိုးထညျ့လိုကျ . .စောကျစကေို့ ပှတျခလြေိုကျ နဲ့ တကိုယျရညျ အာသာဖွေ စဉျက ယောကငြ်္ား လီးကို လိုလား တောငျ့တ ခဲ့ရ သညျ ဘဲ . . ။ ဘိုတောကျ ကိုလဲ ဆိုဖီယာ သညျ တိတျတခိုး စိတျဝငျစားမိခဲ့ရတာက ဘိုတောကျ သူတို့အိမျမှာ မွကျရိပျ ..ကားရဆေေး . .အမဖွေဈသူ ဘီဘီကို ဟငျးဝိုငျးခကျြ အပွီး ဘိုတောကျ သညျ ကားဂိုဒေါငျမှာ ရှိနတေဲ့ ရခြေိုးခနျးလေးမှာ ရခြေိုး တုံးက သူမ သညျ ဘိုတောကျ ရခြေိုးတာကို ခြောငျးမွောငျးခဲ့ ဘူးခဲ့ရာ ..ဘိုတောကျ လီးကို တှမွေ့ငျဘူးခဲ့ပေ သညျ . .။
ထိုစဉျအခါထဲက ..ဘိုတောကျရဲ့ လီးမဲမဲကွီးကို ကွညျ့ကာ စိတျတှေ ထ ခဲ့ ကွှ ခဲ့တာပါ . .။ ဒီလီးမဲမဲ တုတျတုတျကွီး ကို ညတိုငျး . .မွငျယောငျပွီး ဒါကွီးနဲ့ အသှငျးခံရရငျ ဘယျလိုနမေလဲ . .ဆိုတဲ့ . .စိတျကူးယဉျ ကာ မိမိဖါသာ ပှတျပွီး အာသာဖွနေခေဲ့ ရတဲ့ ညတှေ မြားခဲ့လေ သညျ . .။အခုတော့ သညျ လီးတုတျတုတျကွီး သညျ သူမ စောကျပတျထဲ ထိုးသှငျးထားနမေိရပွီ . .။ စောကျပတျထဲက တစိမျ့စိမျ့ ယားကာ အရမြေားက ထှကျပွီးရငျး ထှကျရငျး . .. ဖွဈနရေ သညျ . .။ အို . .လီးကွီး လှုပျလာပွနျ သညျ . .။ ထိုးမဲ့ဆငျ နောကျတလှမျး ဆုတျ ဆိုသလို . .လီးကွီးကို ဘိုတောကျ က ဆုတျလိုကျ သှငျးလိုကျ လုပျနေ သညျ . .။ ဘယျညာ နှဲ့ကာ နှဲ့ကာ နဲ့ဖပျကနဲ ထိုးထညျ့ပွနျ သညျ . . .။ လီးကွီး လှုပျလိုကျတိုငျး သူမ အဖို့ အရသာ ထူးကဲ ရ သညျ . .။လီးကွီးက သူမ စောကျပတျအတှငျးသားတှကေို ပှတျတိုကျမိနတောကွောငျ့ပေါ့ . .။
အရသာ ကောငျးကောငျး သှားတော့ ..ဆိုဖီယာ ကိုယျတိုငျက လှုပျခငျြလာ သညျ . .။ ဘိုတောကျ လဲ ဝငျသမြှ လေး ထိုးလိုကျ ဆုတျလိုကျ နဲ့ လိုးနေ သညျ . .။ ကွာလာတော့ . .ကငျြ့သားရလာသညျ ။ လိုးလို့ရလာ သညျ ။ ကောငျးသထကျ ကောငျးလာ သညျ . .။ အား…အငျ့အငျ့……အို…အို .. . ဟငျး . . .ဟငျ့ . . ဖှတျ…ဖပျ..ဖှတျ..ဖပျ ……ဖှတျ . . .. ဆိုဖီယာ ရဲ့ ညညျးညူသံတှနေဲ့အတူ စောကျပတျနဲ့လီး ..အသှငျးအထုတျ လုပျခြိနျမှာ ဖှတျဖှတျ . .ဖပျဖပျ အသံတှေ ထှကျ သညျ . . .။ လိုးခွငျးရဲ့ ကောငျးခွငျး အရသာ ကို ဆိုဖီယာ ရရှိခံစားနရေပွီ . .. ။ အျော ..ဒါကွောငျ့ လူသားတှေ လိုးကွတာကိုး . .လို့ ဆိုဖီယာ တှေးမိရ သညျ .. ။ ဘိုတောကျ ကတော့ ပနျးတိုငျ ရောကျရေး ..ဦးတညျနေ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ့ စောကျပတျ အတှငျးသားတှကေ အိနေ သညျ . .။ တငျးကပျြတဲ့ အရသာထူးကွောငျ့ ဘိုတောကျ ခဏလေး နဲ့ပွီးခငျြလာရ သညျ .။
ဆိုဖီယာ့ပေါငျတနျတှကေို အပျေါကို ထောငျတှနျးရငျး သူ့ လီးကို ထိုးဆောငျ့လတေော့ရာ မကွာခငျမှာဘဲ သုတျတှေ ပနျးထှကျခါ ပွီးဆုံးခွငျး ကို ရောကျသှားရတော့ သညျ ။ ဘိုတောကျရဲ့ မကျြနှာက ခြှေး စကျတှေ သညျ ဆိုဖီယာ့ ရငျဘတျပျေါကို တောကျကနဲတောကျကနဲ ကြ လာ သညျ . .။ ဆိုဖီယာ သညျ မကျြလုံးတှေ ပိတျခါ . .ငွိမျနေ သညျ . .။ ဘိုတောကျ က သူ့ လီးကို ဆိုဖီယာ့ စောကျခေါငျးထဲက မထုတျသေး . .။ ဘိုတောကျ သညျ ဆိုဖီယာ့ကို မထငျမမှတျဘဲ လိုးခှငျ့ရလိုကျပွီး ..နောကျထပျ ဘယျတော့မြား ထပျပွီး အခှငျ့အရေးရမလဲ စောငျ့မြှျောနခေဲ့ပမေဲ့ ..ထပျဆုံတှကေ့ာ လိုးနိုငျခှငျ့ မရရှိသေးပေ ။ ထိုနကေ့ ..ဆိုဖိယာ နဲ့သူ နောကျထပျ တကွိမျ ထပျပွီး လိုးကွသေး သညျ .. ။ ဒီလို ဘိုတောကျ အခှငျ့အရေး စောငျ့ခြောငျးနသေလိုဘဲ ဆိုဖီယာ သညျ ဘိုတောကျ နဲ့ လိုးတဲ့ အရသာကို ပွနျလညျ စဉျးစား သတိရ ..မွငျ ယောငျပွီး ဘိုတောကျ ရဲ့ အလိုးကို ထပျခံခငျြနမေိရ ပေ သညျ . .။ ခြောကျဒရီ ရဲ့ ညီမ တဦး ဖွဈတဲ့ ..ဇိနပျ သညျ ညောငျလေးပငျမွို့က လာလညျပွီး အပွနျမှာ ဆိုဖီယာ့ကို ညောငျလေးပငျကို အလညျ ချေါ သညျ ..။
ဆိုဖီယာက မလိုကျခငျြလှပမေဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ က အတငျး တိုကျတှနျးလို့ အဒျေါ ဖွဈသူ အနျတီ ဇိနပျ နဲ့ ပါသှားရ သညျ . .။ ခြောငျဒရီ လဲ မမွေို့က သူ့ အမြိုးတှကေ မမွေို့ မှာ စားသောကျဆိုငျ ဖှငျ့ ရနျအတှကျ လာပွီး လလေ့ာစခေငျြကွောငျး အတငျး ချေါကွတာနဲ့ မမွေို့ကို သှားရ သညျ . .။ ဘီဘီ ဘဲ လုပျငနျးတှကေို ဦးစီးဖို့ ကနျြခဲ့ သညျ . .။ ဘီဘီ သညျ ဘိုတောကျ ရှိနတောကွောငျ့ ဘာမှ ထှထှေေ ထူးထူး လုပျစရာ မလိုဘဲ ..အိမျမှာ ဟငျးခကျြ လိုကျ ရုပျမွငျသံကွား ကွညျ့လိုကျ နဲ့ ဇိမျကနြေ သညျ ။ ထမငျးခကျြ ဒျေါဇီကို လဲ ခငျပှနျးသညျ ခြောကျဒရီ နဲ့ သမီး ဆိုဖီယာ တို့ မရှိခိုကျ ..အိမျပွနျခှငျ့ပေးလိုကျ တာမို့ ထမငျးခကျြ ဒျေါဇီ လဲ ဝမျးသာအားရ သူမ ဇာတိ ပဲခူးမွို့ကို ပွနျသှား သညျ …။ ဘိုတောကျလဲ ဆိုငျ၃ ဆိုငျနဲ့ အလုပျမြားနေ သညျ ..။
သူ့ .. ဘော့ဈအဟောငျး ဦးလှနျးမောငျ ပှဲရုံက သူတို့ လိုအပျတဲ့ ကုနျတှေ မှာရ သညျ .. ။ ဘိုတောကျ ကရာခြီ ဆိုငျ မှာ ရှိနတေုံး ..လာပို့တာ ..အရငျ သူနဲ့ အတူတူ ကုနျ ပို့ဘူးတဲ့ဒရိုငျဘာဦးစ ဖွဈနသေညျ . .။ သိနျးထှနျး ဆိုတဲ့ လူ ကို မတှလေို့ ဦးစကို မေးကွညျ့တော့ ..သိနျးထှနျး က ငှတှေေ အလှဲသုံးစား လုပျလို့ မိတော့ .. ဦးလှနျးမောငျ အလုပျ ထုတျပဈလိုကျ သညျ . .တဲ့ . .။ ဦးလှနျးမောငျ လဲ ဘိုတောကျလို လူကောငျးကို ကုလားကွီး ခြောကျဒရီ ကို ပေးပဈမိတာ မှားပွီ လို့ ညညျးညညျးနေ သညျ လို့ ဦးစက ပွောပွ သညျ . . .။
ဘိုတောကျ လဲ ဦးလှနျးမောငျ အတှကျ စားစရာမြား ..ဦးစ နဲ့ ထညျ့ပေးလိုကျ သညျ ….။ ညနစေောငျးမှာ ဘီဘီ မှာထားတဲ့ ပစ်စညျးတခြို့ သှားပို့ သညျ . .။ ခြောကျဒရီ ရဲ့ မာစီဒီးကားနကျကွီး ..ဘီဘီ စီးနကြေ တိုယိုတာ ခရကျစီဒါကားကွီးတှေ သညျ တိုကျကွီး ဆငျဝငျအောကျမှာ ရပျထားကွလို့ ဘိုတောကျ လဲ သူမောငျးလာတဲ့ ဟိုငျးလပျဈကားကွီးကို ခပျ ဝေးဝေးမှာဘဲ ရပျလိုကျပွီး ဆငျး လြောကျသှား သညျ ..။ သူ့မှာ အိမျသော့အပိုပါလို့ ..တံခါးဘဲလျ တီးမနတေော့ဘဲ သူ့ဖါသာ ဖှငျ့ဝငျလိုကျ သညျ . . ။ အထုပျတှေ ပှပေို့ကျပွီး အိမျထဲ ဝငျလိုကျတာ နဲ့ ..အပျေါထပျမှ.. ထူးခွားတဲ့အသံတှကေို သူ ကွားလိုကျရ သညျ …။ တခြို့ က ခွငျထောငျသံ လို့ ချေါတဲ့ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ ကွားရတဲ့ အသံတှေ . .။
အတိအကဆြိုရရငျ..မိနျးမရဲ့ညညျးသံ..ယောကငြ်္ားရဲ့တအငျးအငျးတရှူးရှူးနဲ့အားယူသံ.. . . ဆောငျ့တာညှောငျ့တာတှကွေောငျ့ ကုတငျတကြိကြိ မွညျတဲ့အသံ . .. နဲ့ လီးနဲ့ စောကျပတျ အ ဝငျအထှကျမှာ မွညျတဲ့ …တဖှတျဖှတျ တဖပျဖပျ . . အသံတှပေါ ဘဲ . . .။ ဟိုကျ …ခြောငျဒရီ လဲ မရှိ ..။ ခြောငျဒရီတို့ အိပျခနျးကွီးထဲက အသံတှေ ဖွဈ နလေို့ ဘိုတောကျ အရမျး .. စိတျဝငျစားသှား သညျ …။ အိပျခနျးထဲကို ဘိုတောကျ ခြောငျးကွညျ့လိုကျ သညျ . ..။ အိုး . . ဘီဘီ နဲ့ ဒရိုငျဘာ အီစှတျ ပါလား . .. ။ ဘိုတောကျ . . တကယျ့ကို အံ့သွ သှား သညျ .. ။ ဘီဘီ သညျ ကုတငျစောငျးမှာ လေးဘကျကွီးကုနျးလကျြ ..အီစှတျက ဘီဘီရဲ့ ခါးကို ဆှဲဆှဲပွီး အနောကျမှ လိုးဆောငျ့ပေးနေ ပါ သညျ . .။ ဘီဘီ ရဲ့ ဖငျဖွူဖွူကွီးတှေ သညျ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး ..တုနျခါနေ သညျ .. ။
အီစှတျ ရဲ့ လီး သညျ တျောတျောရှညျ သညျ .. ။ ထူးဆနျးသညျမှာ ဘီဘီ ရဲ့ စောကျဖုတျကွီး သညျ သမီး ဆိုဖီယာ ရဲ့ စောကျဖုတျလိုဘဲ အမှေးမရှိဘဲ ကတုံး ဖွဈနသေညျ .. ။ ဘိုတောကျတို့ တောမှာက စောကျကတုံး လို့ ချေါတဲ့ အမှေး မဲ့ စောကျဖုတျ ပေါ့ .. ။ ရိပျထားသလား ….နုတျသလားတော့ မသိ ..။ ဆောငျ့..အီစှတျ…ဆောငျ့..နာနာဆောငျ့ . .. ငါ ပွီးခါနီးပွီ . .. ဖှတျ..ဘှတျ..ဖပျ..ဖှတျ..ဖပျ…အငျး…အငျး…..အား…ဆောငျ့…ဆောငျ့…….. အီစှတျ သညျ လူပိနျသလောကျ လီးက ကွီး သညျ ..။ အီစှတျ သညျ ဒီလို လုပျမယျ လို့ မထငျရ ..။ ကြိုးနှံသော အလုပျသမား တယောကျ ပုံစံ နဲ့ အီစှတျ သညျ သူ့ ဘော့ဈ ရဲ့ မိနျးမ ကို ရရေလေညျလညျ လိုးနေ သညျ .။
ဘိုတောကျ သညျ ဘီဘီ နဲ့ အီစှတျတို့ အပီအပွငျ လိုးနကွေတာကို ကွညျ့ပွီး ကာမမီးတှေ တောကျလောငျလာပွီ .. ။ သူ့ လီးကွီး မှာ မတျမတျတောငျ နပွေီ . .။ အီစှတျ သညျ ဘီဘီ့ စိတျကွိုကျ အားသှနျပွီး ဆောငျ့လသေညျ . .။ အီစှတျရဲ့ တှဲလောငျးကနြတေဲ့ေ၈ှးစိနှဈလုံး သညျ ဘီဘီ့ ဖငျကွားကို ဗတျြကနဲဗတျြကနဲ ဆီးခကျြ မှနျမှနျ ရိုကျခတျနေ သညျ . .အီစှတျရဲ့လီးမဲမဲကွီး..ဖါတမာ့စောကျပတျကွီးထဲ အဝငျအထှကျ လုပျနတောကို မွငျရတဲ့ ဘိုတောကျမှာ ..သူကိုယျတိုငျ အခနျးထဲ ဝငျသှားပွီး ဘီဘီ့ ကို တကျလိုးပဈခငျြလာ ရ သညျ . .။ နဂိုထဲကမှ ဘီဘီ့ ကို သူ လိုးခငျြနတော . .။ ဘီဘီ သညျ တောငျ့တငျးစိုပွဆေဲ . .ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ရဆေေးငါးကွီး ဖွဈ သညျ . .။အီစှတျ သညျ ညဈပတျစုတျပွတျကာ ပပေတေတေေ နံနံစျောစျော နသေော ကုလားတယောကျ ဖွဈ သညျ ..။ ဘီဘီ သညျ အရမျးကို ဆာနလေိုက အီစှတျလို ကုလားကို ကုနျးတာ ဖွဈမညျ . .။
ဒီအခြိနျမှာ ဘီဘီ သညျ ပွီးခငျြလာလို့ လေးဘကျထောကျ ကုနျးပေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွီးလမေ့ရှိတာကွောငျ့ .အီစှတျကိုသူပကျလကျလှနျပေးမညျ. .သူ့..ခွထေောကျတှကေို ပုခုံးပျေါထမျးတငျပွီး လိုးပေးဖို့ ပွောလိုကျပွီး ..ကုနျးနရော က ပကျလကျလှနျ အိပျလိုကျ သညျ . .။ သူမ ပေါငျတနျဖွူကွီးတှေ ကို အစှမျးကုနျ ကားပေးလိုကျ ပွီး .. “လိုးစမျး အီစှတျ . .ငါ ပွီးခငျြနပွေီ . .တအား ဆောငျ့ပေးစမျးဟာ . .”လို့ အီစှတျကို အမိနျ့ပေးလေ သညျ ..။ အီစှတျလဲ ခြှေးတှေ စီးကနြအေောငျ လိုးဆောငျ့ပေးခဲ့ပမေဲ့ ဘီဘီ က ကာမလမျးဆုံးကို မရောကျသေးလို့ . .ဟောဟဲဟောဟဲ နဲ့ ပေါငျတနျဖွူဖွူကွီး နှဈခြောငျးကို သူ့ ပုခုံးပျေါ ထမျးတငျလိုကျပွီး …သူ့လီးမဲမဲရှညျရှညျကွီးကို ဘီဘီ့ အ ရတှေနေဲ့ စိုရှဲပွောငျလကျနတေဲ့ စောကျပတျကွီးထဲ ထိုးသှငျးလိုကျပါ သညျ . .။ စိုရှဲ ပွောငျလကျနတေဲ့ ဘီဘီ့ စောကျပတျကွီးထဲ ဗြိဘှတျ ဆိုပွီး အီစှတျ ရဲ့ လီးတနျ ကွီး ဝငျသှား ခြိနျ ဘီဘီ သညျ အခနျးဝကို မကျြနှာပွုထားပွီမို့ ခြောငျးနသေော ဘိုတောကျကို တှသှေ့ားလေ သညျ .. ။ ဘိုတောကျကလဲ ..သူ့လီးတနျကွီးကို ဆုတျကိုငျကာ ပှတျတိုကျနရေငျး . .ဘီဘီ နဲ့ မကျြလုံးခငျြးဆုံမိ သညျ . .။
အီစှတျကတော့ အားကူနျ လိုးဆောငျ့ပေးနေ သညျ ..။ သူ့လီးတနျကွီးကို တဆုံး ထိ ထိုးသှငျးကာ ဆောငျ့လိုးပေးနေ သညျ .. ။ အငျး . .. ထိတယျ…ထိတယျ . .ပွီးတော့မယျ . .ဆောငျ့ဆောငျ့..နငျ ယောကငြ်္ား မဟုတျဘူးလား..လိုးလိုး ..ဆောငျ့လိုး . .. အီစှတျမှာ . .ဘီဘီ တအား တောငျးဆိုနတောကွောငျ့ .. . .ဘိဘီ့ပေါငျတနျတှကေို ထမျးပွီး . .ဒလစပျ လိုးဆောငျ့ပေးတော့ ဘီဘီလဲ . .. အာ…အာ…အာ…အာ… ဆိုပွီး ကော့လနျသှား သညျ . .။မကျြလုံးစုံမှိတျကာ အကွာကွီး ညညျးနေ သညျ . .။ ဘီဘီ သညျ သူမ ပွီးသှားတာနဲ့ အီစှတျကို တှနျးပဈလိုကျ သညျ . .။ အီစှတျရဲ့ လီးတနျကွီး ဗှကျကနဲ . .ဘီဘီ့ စောကျခေါငျးထဲက ကြှတျထှကျလာ သညျ . .။ အီစှတျကငါမပွီးသေးဘူး..ဘီဘီ…လို့မကမြေနပျပွောရငျး…မတျမတျတောငျနတေဲ့ လီးကွီး နဲ့ ..ဘီဘီ့ကို ထပျလိုးရနျ ကပျလာ သညျ . .။ ဘီဘီက အီစှတျကို ဆောငျ့ကနျလိုကျ သညျ ..။
အီစှတျလဲ ..ကွမျးပျေါကို ပကျလကျလနျကြ သှားရ သညျ . .။ ဘီဘီ ..နငျမကောငျးဘူးဟာ . .နငျ့ကို ပွီးတဲ့အထိ ငါ …လိုးပေး… တိတျစမျး ..ခှေးကုလား ..နငျအခုထှကျသှား . . အီစှတျ သညျ လီးကွီးကို ဆုတျကိုငျကာ တှတှေကွေီး ရပျနေ သညျ ..။ ဒေါသထှကျ နတေဲ့ မကျြနှာ နီနီကွီး နဲ့ . . ငါ့ကို..မရကျစကျပါနဲ့ဟာ .. . လို့ တောငျးပနျသလို ပွောလိုကျ သညျ .. ။ ဒီတော့မှ ဘီဘီလဲ .. ကဲ လာ ..လာ..ငါကစောကျပတျကွညျ့ ပွီး ကှငျးထုလိုကျ … ဆိုပွီး ကုတငျစောငျးမှာ ဖငျထောငျကုနျးလိုကျ သညျ . .။ အီစှတျလဲ . . ငါပွီးအောငျတော့ လိုးလိုကျပါရစဟော . .ဆနျ့တငနျ့ငနျ့ကွီးဟ .. လို့ ပွောရငျး …ဖငျကွားက ပွူးပွူးကွီး စူထှကျနတေဲ့ ဘီဘီ့စောကျဖုတျကွီးထဲ ..သူ့ လီးကွီးကို သှငျးထညျ့လေ သညျ .. ။ ဘီဘီလဲ..တဗဈြတောကျတောကျ… ..မကမြေခမျြး ရရှေတျ ရငျး . .အီစှတျကို.. ပေးလိုးလိုကျ လေ သညျ . ..။
အီစှတျလဲ ..ဘီဘီ့ဖငျတုံးကွီးတှကေို ကိုငျဆုတျရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးလေ သညျ . .။ မကွာခငျဘဲ အီစှတျ ..ပွီးသှား သညျ . .။ သူ့လီးကွီးကို တဆုံးထိုးနှဈထားရငျး သုတျတှကေို ဘီဘီ့စောကျခေါငျးထဲ ပနျးထုတျလိုကျ သညျ . ..။ အား…အငျး . .ကောငျးလိုကျတာ ဘီဘီ ရယျ . .. တျောတော့ စောကျကောငျ. .ဇိမျခံမနနေဲ့ . .သှား .. ငါ့အတှကျ ဆိုငျ က .. ထမငျးဟငျး သှားယူပေး . .ငါ အိမျမှာ မခကျြနိုငျဘူး .. ဘာဟငျးနဲ့ . ..စားမှာလဲ . . လြာမရှညျနဲ့အီစှတျ . .မနျနဂြော ကို ပွောလိုကျ .. ငါ့အတှကျလို့ . သူသိတယျ . အီစှတျ သူ့ ဘောငျးဘီ ကောကျဝတျ သညျ . . .။ ဘီဘီ သညျ အီစှတျ ကားမောငျး ထှကျသှားသောအခါ ..အိပျရာက လူးလဲထ သညျ . .။ ဘိုတောကျ ကို လိုကျရှာ သညျ ..။ ဘိုတောကျ မရှိတော့ ..။ ဘီဘီ လဲ ဘိုတောကျ က သူ့ လငျကွီး ခြောကျဒရီ့ကို သူမနဲ့ အီစှတျအကွောငျး သှားတိုငျလိုကျမှာ စိုးရိမျနပွေီ ..။
ဘိုတောကျ ကို နုတျပိတျမှ ဖွဈမညျ . .။ ဘီဘီ လဲ ရမေိုးခြိုး ..အဝတျအစားလဲ ပွီးနောကျ အီစှတျ ယူလာပေးတဲ့ သူတို့ပိုငျသော ဆိုငျ တဆိုငျက ထောပတျထမငျးနဲ့ ကွကျသားဟငျးကို စားသညျ ။ အီစှတျ . .ဘိုတောကျ တှခေဲ့လား . . မတှဘေူ့း..ဘီဘီ . . ဆိုငျ၃ဆိုငျစလုံးကို ဖုနျးဆကျကွညျ့စမျး . .ဘိုတောကျ ဘယျမှာလဲ သိခငျြတယျ . .ငါ ခိုငျးစရာ ရှိလို့ . . ကောငျးပွီ..ဘီဘီ . .ဒါနဲ့ ငါ နဲ့ ဘီဘီ နဲ့ ဘယျတော့ ထပျ …ဟိုဒငျး . . လြာမရှညျနဲ့ အီစှတျ . .နငျ့ စောကျပါးစပျ ပိတျထား . . ဘိုတောကျ. . . ဗြာ….ဘီဘီ . .. မငျး ဘီဘီ့ကို ရှောငျနတောလား . . . မရှောငျပါဘူး…ဘီဘီ . . မငျး . .ဘီဘီ အီစှတျ နဲ့ ဖွဈတဲ့ ကိစ်စ …ဘယျသူ့ကိုမှ လြောကျ မပွောစခေငျြဘူး ပွောမှာ မဟုတျပါဘူး .. တကယျလား . .မငျး နုတျလုံမယျ ဆိုရငျ ဘီဘီ က မငျးကို ဆုခမြှာ . . ဗြာ….တကယျလား . . .ဘာဆုလဲ ဘီဘီ . . . မငျးဘာလိုခငျြလဲ ပွော ..မငျးလိုခငျြတာ ..ဘီဘီ ပေးမှာပေါ့ . . တကယျပေးမှာလား . . တကယျပေါ့ ..ဘာလိုခငျြလဲ ….ပွော.. . ဘိုတောကျ က ဘီဘီ့ကို စိုကျကွညျ့ပွီး . . ကနြျောလိုခငျြတာ . .ဘီဘီ… သိပါတယျလေ . . လို့ ပွောလိုကျပါ သညျ . . . ။
ဘီဘီက ပွုံးစိစိ နဲ့ .. မသိဘူး . .. ဘာလဲ . .ပွောမှ သိမှာပေါ့ . .လို့ ပွောလေ သညျ . .။ ဘိုတောကျ လဲ ဘီဘီ့ နို့ထှားထှားတှကေို စိုကျကွညျ့ပွီး .. ဘီဘီ ..အီစှတျကို ကြှေးတာတှပေေါ့ . .ကနြေျာ့ကိုလဲ ကြှေးမလား . . လို့ ပွောလိုကျ သညျ .. ။ ဘီဘီလဲ .. ဘာတှလေဲ..ဆိတျသားကဘတျလား . . လို့ စပျဖွဲဖွဲ နဲ့ပွောနပွေနျ သညျ . .။ ဘိုတောကျလဲဆိတျသားကဘတျမဟုတျဘူး… . .ဆိတျသားကဘတျထကျ အဆ၁၀၀ လောကျပိုကောငျးတဲ့ ဟောဒီ ဘီဘီ့ နို့ကွီးတှကေို စို့ခငျြတာ . .ဆို ပွီး ဘီဘီ့ နို့တှကေို လကျညှိုးနဲ့ ထိကာ ပွ သညျ . .။ ဘီဘီ လဲ တခဈခဈ ရယျပွီး အိပျခနျးထဲကို ဝငျပွေးပါ သညျ . .။ဘီဘီ့ စှငျ့ကားတဲ့ ဖငျတှေ ဟာ တုနျခါ လှုပျရမျးသှား တာ ဘိုတောကျ တှလေို့ကျရပါ သညျ . ..။ ဘိုတောကျလဲ ရုတျတရကျ ကွောငျနပွေီးမှ ဘီဘီ့အနောကျက ပွေးလိုကျသှားပါ သညျ . .။ အိပျခနျးထဲက ကုတငျကွီးပျေါမှာ ဘီဘီ သညျ မှောကျရကျ အိပျနတော ဘိုတောကျ တှလေို့ကျရ သညျ . .။
ဘီဘီ . . . ဟိတျကောငျလေး . .အိပျခနျးတံခါး ကို ဂကျြခလြိုကျကှာ . . ဘိုတောကျ တံခါးဆီကို ပွေးသှား သညျ . .။ ဘီဘီ့ကို လိုးရတော့မညျ ဆိုတာ သူ သိလိုကျရတာနဲ့သူ့ပေါငျကွားက ဖှားဖကျတျော လီးတနျက ဘနျးကနဲ ထောငျထ လာလေ သညျ . .။ ဘီဘီ့အနားကို ပွနျရောကျလာသောအခါ ဘီဘီက .. ပွစမျး . .မငျးလေး . .ရဲ့ ဒုတျ ကို ကွညျ့ခငျြတယျ . .. ဆိုပွီး ဘိုတောကျရဲ့ လုံခညျြကို ဖတျြကနဲ ဆှဲ ခြှတျခလြိုကျ ပါ သညျ . .။ အို…အာပါပါ . . ဘီဘီ မကျြလုံးတှေ ဝိုငျးစကျ ..အရောငျတောကျပ သှားကွ သညျ . .။ မွနျမာလီး လဲ ကုလားထကျ မလြော့တာ ဘိဘီ တှသှေ့ားပွီ . .။ ဘိုတောကျ ရဲ့ လီးဟာ အီစှတျ ရဲ့ လီးတနျကွီး လိုဘဲ တုတျလဲတုတျ ..ရှညျလဲ ရှညျ နတော ဘီဘီ တှလေို့ကျရပေ သညျ . .။ ဘိုတောကျလို ကောငျလေးမှာ ဒီလို လကျနကျကွီး တပျဆငျထားနတော ဘိဘီ မသိခဲ့ …။ အသိနောကျကလြေ ခွငျး . . .။
ဘီဘီက … လာစမျး…ဒီအနား . . ဆိုပွီး ကုတငျပျေါ ဘေးတစောငျး အိပျရငျး ချေါ . သညျ . .။ဘိုတောကျက ဘီဘီ့မကျြနှာအနားထိသူ့လီးတနျကွီးကို …တိုးကပျပေးလိုကျ သညျ . ..။ နဲတာကွီး မဟုတျဘူး . .ဘိုတောကျရယျ . . ဘီဘီ သညျ ဘိုတောကျ လီးကွီးကို မွငျရုံနဲ့ ..သူမ စောကျပတျထဲက တတုတျတုတျ နဲ့..အရတှေေ စိမျ့ထှကျနတော ခံစားလိုကျရပွီး . .တအားဘဲ ယား လာရ သညျ ..။ သူမ နှုတျခမျးနား တိုးကပျပေးလာတဲ့ ဒဈပွဲကားကားကွီး ကို စုတျခငျြစိတျတှေ တဖှါဖှါး ပျေါပေါကျလာပေ သညျ . .။ သို့ပမေဲ့ ဘီဘီ သညျ ..ဟနျလုပျလိုကျ သညျ . .။ ကွောကျတယျကှာ. .သူ့ဟာကွီးက အရမျးကွီးလဲကွီး ..ရှညျလဲ ရှညျတယျ . .. ဘိုတောကျလဲ အီစှတျကို လိုးဆောငျ့ခိုငျးနတော သူ့မကျြမွငျမို့ဘီဘီ ….ဟနျလုပျနမှေနျး သိလေ သညျ . .။ ဘီဘီ့လကျကို ဆှဲယူကာ ..သူ့လီးကွီးကို ကိုငျခိုငျးလိုကျ သညျ . .။
ဘီဘီ လဲ လီးတနျကွီးကို ဆုတျကိုငျ မိတော့ ..ကွကျသီးတှေ တအားထရပွီး ခံခငျြစိတျတှေ က ထိနျးလို့မရခငျြတော့ . .။ ဘိုတောကျ . .မငျး ဘီဘီ့ကို လိုးပေးကှာ . . . ဘီဘီ လဲ ဘိုတောကျ ရဲ့ လီးကွီးကို လကျတဖကျနဲ့ အားမလိုအားမရ ဖဈြညှဈရငျး သူမ ထမိနျကို ကနျြလကျတဖကျနဲ့ လှနျတငျလိုကျပါ သညျ . .။ ဘီဘီရဲ့ဖွူဝငျးတဲ့ ပေါငျတနျရှညျနှဈခြောငျး နဲ့ ပေါငျကွားတဲ့တဲ့က ဖေါငျးမို့တဲ့ စောကျဖုတျကွီး ကို ဘှားကနဲ မွငျလိုကျ တဲ့အခါ တဏှာ စိတျတှေ ဝုနျးကနဲ ထကွှ ရပွီး .. ဘီဘီ့ ပေါငျတနျတှအေကွား ခေါငျးထိုးစိုကျခါ ..စောကျဖုတျကွီးကို နှာခေါငျးနဲ့ထိုးဆှလိုကျ ရှူလိုကျ လုပျနသေလို ..ပါးစပျနဲ့ လဲ နမျး စုတျ လေ သညျ . .။ အ….အ….အ….အို .. . .အာ…အာ……အာ… ဘီဘီ ရဲ့ အျောသံ က ကယျြလောငျလှ သညျ . .. ။ ဘိုတောကျသညျ..ဘီဘီ့စောကျဖုတျကွီးကို တပွတျပွတျ နဲ့ယကျပါတော့သညျ .. ။.ဘီဘီ့ဖငျတုံးကွီးတှလေဲကို ရရေလေညျလညျ ဆုတျနယျပဈမိနေ သညျ . .. ။ သူ ဘီဘီ့ကို ကွညျ့ကွညျ့ပွီး ..စိတျတှေ ဖေါကျပွနျခဲ့တာ ကွာနပွေီ …။ဘိုတောကျ သညျ သူ့လြာထိပျခြှနျခြှနျ နဲ့ ဘီဘီ့ စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားနှဈမှာကို ထိုးခှဲကာ စောကျခေါငျးထဲ ကို လြာထိုးသှငျးတော့ ဘီဘီ ဖငျကွီးတှေ ဘယျညာ ရမျးခါပွီး တဆတျဆတျ တုနျ နသေညျ . .။
လူးခါနရေသညျ. .လငျဖွဈသော..ခြောကျဒရီကော..အီစှတျရော ဒီလိုတခါမှ စောကျဖုတျကို မကလိပေးဘူးခဲ့ ..။ ဘာဂြာမှာ မွနျမာကောငျလေး က ကုလားမြားထကျ သာသှားပွီ …. ။ အို . ပွောရငျးဆိုရငျး …ဘိုတောကျ …သူ..သူ.. ဘီဘီ့စောကျစိ ကို လြာထိပျလြှနျလေးနဲ့ ထိုးဆှ ကလိနပွေနျပွီ . .အာ..ဟာဟာ… အငျ….ဘီဘီ . .ကာမစိတျတှေ ထကွှရတာ . .အခုဘဲ ဘိုတောကျရဲ့ လီး အပျေါမှာတကျထိုငျလိုကျခငျြစိတျတှေ ပေါကျလာရ သညျ . ..။ တျော…တျောပွီကှယျ . . ဘီဘီ မခံနိုငျတော့ဘူး . .. ဘိုတောကျ . . ဘိုတောကျ သဘောပေါကျသညျ . .။ ဘီဘီ အရမျး ခံခငျြနပွေီ …. ။ ဘိုတောကျ လဲ ဘီဘီ့ကို ကုတငျစောငျးမှာ ပေါငျဖွဲကားစပွေီး သူက ကုတငျအောကျမှ မတျတပျရပျလကျြ အနအေထားနဲ့ ..ဘီဘီ့ စောကျဖုတျကွီးထဲကို သူ့လီးခြောငျးကို သှငျးလေ သညျ . ..။ အရတှေေ ရှဲနသေော စောကျဖုတျကွီးထဲ ဗြိကနဲ လီးကွီး သုံးပုံနှဈပုံခနျ့ ဝငျသှား ရာ ဘီဘီ လဲ .. ဖွေးဖွေး ..ထိုးပါဟာ . . လို့.. ပွောရငျး ဖငျကွီးတှကေို ပိုပွီး ကော့ပေးလိုကျပါ သညျ . .။
တျောတျော လီးတုတျတဲ့ကောငျဘဲ ..ငါ့စောကျပတျထဲ ..တငျပွညျ့ကပျြပွညျ့ကွီး ဖွဈနရေအောငျကို တုတျတယျ . . .လို့ စိတျထဲ ဘီဘီ မှတျခကျြခနြဆေဲ ..ဘိုတောကျ လီးကွီး သူမ အဖုတျထဲ တဆုံး ဝငျလာ သညျ .. ။ ဘိုတောကျရဲ့..လမှေးကောကျကောကျတှေ သူမရဲ့ ပွောငျနတေဲ့ ဆီးခုံကွီး ကို .. လာထိကပျတဲ့အထိ..လီးတနျအရငျးအထိ ဝငျနမေိ သညျ . .။ ဘီဘီ . .ခံနိုငျတယျမဟုတျလား . . လိုးတော့မယျနျော . . ဘိုတောကျ သညျ အီစှတျ က ဘီဘီ့ကို လိုးပေးတာကို မွငျခဲ့သူ ဖွဈတာကွောငျ့ ဘီဘီ ဘယျလို ကွမျးကွမျး ဆောငျ့ခိုငျးတတျသလဲ သိနသေူမို့ ဘီဘီ့ ကို ခပျပွငျးပွငျး..လိုးခကျြတှနေဲ့ လိုးပေးဖို့ ..စဉျးစားထား ပေ သညျ . .။
ဘီဘီက ခေါငျးညှိမျ့ပွပွီး . . ရတယျ . .လိုး..လိုး .. လို့ ပွနျဖွေ သညျ ..။ ဘိုတောကျလဲ ဘီဘီ ခံနိုငျလို့ကတော့ လိုးပွီဘဲ …။ ဘီဘီ့နို့ကော့ကော့ကွီးတှကေို ဆုတျကိုငျပွီး …အားရပါးရ လိုးဆောငျ့ပါတော့ သညျ .. ။ ဘီဘီလဲ ဘိုတောကျ ရဲ့ လိုးဆောငျ့ခကျြတှဟော အီစှတျထကျ အားပါတာ တှရေ့သလို ဘိုတောကျ သညျ ငယျရှယျသူမို့ ဆကျတိုကျ ဒလစပျ လိုးနိုငျတာကိုလဲ တှလေ့ာရ သညျ . .။ အိုး…ဝေါငျး . ..အိုး…အား…..နဲ့ ဘီဘီ သဘောတှကေနြပွေီး သူမကလဲ အားကမြခံ အောကျမှ ပငျ့ပငျ့ပေးနေ သညျ . .။ ကောငျးလား ဘီဘီ.. ကောငျးတယျ.. အရမျး ..ကောငျးတယျ . . ဘီဘီ လဲ ကောငျးသထကျကောငျးလာ သညျမို့ ပုံစံတှဘောတှပွေောငျးမနခေငျြတော့ . .။နောကျအခြီတှကေမြှ သူမစိတျကွိုကျ ပုံစံတှနေဲ့ လိုးတော့မညျ လို့ ဘီဘီ.စဉျစားလိုကျပွီး ဘိုတောကျ ကို အပီ ဆောငျ့ခိုငျးလေ သညျ . .။ ဘိုတောကျလဲ အားသှနျ ကာ ဆှဲလပွေီ . .။
တဖနျးဖနျး ..အသားခငျြးရိုကျခတျသံတှေ ပျေါလာ သညျ …။ ဖှတျ ..ဖှတျ..ဖှတျ…ဖှတျ……နဲ့ ဘီဘီ့စောကျဖုတျကွီးထဲ လီးကွီး ..ဒလစပျ ဆောငျ့နေ သညျ . . .။ အို…ဘိုတောကျ . ..ဆကျတိုကျ ဆောငျ့ ..နာနာလေး . .ပွီးတော့မယျ . ..ဆောငျ့ ဘီဘီ သဲသဲမဲမဲ အောကျကနေ သူမဖငျကွီးတှကေို စကောဝိုငျး မှရေ့မျးပေးနေ သညျ . . .။ဘိုတောကျ လဲ ဖွူဖှေး တောငျ့တငျးတဲ့ ပထနျ မ ကို လိုးခှငျ့ရတာမို့ အားရပါးရကို လိုးဆောငျ့ပဈလိုကျ ရာ ဘီဘီမှာ . .အထှပျအထိပျ ကို တကျလှမျး ရောကျရှိသှားရ ပွီး . .ကာမရဲ့ ကောငျးခွငျး အရသာ ကို ခံစားသှားရပါတော့ သညျ ..။ ဆကျလိုး..ဘိုတောကျ . .မငျးပွီးအောငျ ဆကျ ဆောငျ့ . .မငျးလဲ ပွီးလိုကျပါ .. ဘီဘီ့ စောကျဖုတျထဲမှာဘဲ ပွီးလိုကျပါကှယျ . .. ဘိုတောကျလဲ ဘီဘီ ပွီးသှားပွီမို့ ..ထိနျးမနတေော့ဘဲ ဆကျတိုကျ ဆကျလိုးဆောငျ့ရငျး သုတျတှေ ဘီဘီ့စောကျဖုတျထဲ ဒလဟော ပနျးထုတျခါ ပွီးလိုကျလေ သညျ ………ပွီးပါပွီ။
ဘိုတောက် သည် ဘကြီးဘုန်းကြီးကြောင့် တောမှ မြို့ရောက်ခဲ့ရသလို ဘကြီးဘုန်းကြီးရဲ့..ရပ်ဆွေရပ်မျိုး..ဦးလွန်းမောင်ဒေါ်တင်တင်မြင့်တို့ဆီမှာ..နေခွင့်အ လုပ်လုပ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး လူတလုံး သူတလုံး ဖြစ်လာခဲ့ပေ သည် ။ မိဘမဲ့ တကောင်ကြွက် ဘိုတောက် သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရ သည် ..။ ဘကြီးဘုန်းကြီး က စာသင်ပေး သည် ..။ ဘိုတောက် သည် ဉာဏ်ကောင်း သည် ။ တထွာပြရင် တတောင် မြင် သည် .. ။ ပါးနပ် သည် ..။ထို့ကြောင့် ဘကြီး ဘုန်းကြီးက ဒီကလေးကို ရွာမှာဘဲ ..ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘဲ မထားလို ..။ တိုးတက်ကြီးပွားမဲ့ ကလေး …ဆိုပြီး …မြို့ကိုခေါ်သွားခဲ့သည် ။ ဘကြီးဘုန်းကြီး ခေါ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ က ဦးလွန်းမောင် အိမ်ကို ရောက်တော့ ဘိုတောက် သည် သူဌေးအိမ်က ဧည့်ခန်းကြီးက သားရေဆိုဖါကြီးတွေ မှာ မထိုင်ရဲ . .။ ကြမ်းပြင်မှာဘဲ ထိုင် သည် ။ ဦးလွန်းမောင်က ရိုးအပြီးတောကျသော ဘိုတောက်ကို ကြည့်ပြီး သဘောကျ သည် ။
ဘိုတောက်ကို..မင်းဇာတိက..ဘယ်ကလဲလို့ဦးလွန်းမောင်ကမေးတော့..ဘိုတောက်က သူဟာ..မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ဝက်လူးရွာကလို့ဖြေတာကို ..ဦးလွန်းမောင်က.. မင်းဇာတိ မြို့တွေရွာတွေ က မြင်းတွေ နွားတွေ ဝက်တွေ စုံလို့ဘဲ .. ဆိုပြီး သဘောကျခဲ့ပေ သည် ။ ဘိုတောက် သည် အကင်းပါး ဖျတ်လပ်ပြီး တထွာပြရင် တတောင်မြင်သော လူငယ်တယောက် ဆိုတာ ဦးလွန်းမောင် သိလာသောအခါ သ ဘောကျ လာ သည် . .။ဘိုတောက်လဲ ဘကြီးဘုန်းကြီး သင်ပေးလို့ မြန်မာစာ ရေးတတ် ဖတ်တတ်ရုံ မက အင်္ဂလိပ်စာကို ပါ တော်တော်လေး တီးမိခေါက်မိ သည် ။ ဦးလွန်းမောင် အိမ်မှာ တော်တော်ကြာကြာနေပြီး ဦးလွန်းမောင် ရဲ့ ပွဲရုံမှာ အလုပ်သမားအဖြစ် လုပ်ခဲ့ရပြီး ဘိုတောက် သည် ပွဲရုံက ဆန်ဆီ ဆား ငရုပ် ကြက်သွန်တွေကို ဝယ်နေကျ ဖေါက်သည်တွေ ကို အပတ်စဉ် လစဉ်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရ သည် ။
ဘိုတောက် သည် ရပ်ကွက်ဈေးများမှာ ရှိတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တွေကို ပို့ပေးရသလို..နံမည်ကြီးမြန်မာကုလားတရုပ်..ထမင်းဆိုင်..စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေကို လဲ ပုံမှန်ပို့ပေးရလေ သည် ။ ဘိုတောက် တောက ရောက်ခါစ ကားမမောင်းတတ်ခင်က သူဌေးဦးလွန်းမောင်ရဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ ဦးစ က ကားမောင်းပြီး ဘိုတောက်က ကုန်တွေကို ထမ်းသယ် ချပေးပို့ပေး ခဲ့ပြီး ဘိုတောက် ကားမောင်းလိုင်စင်ရပြီး .. ကားမောင်းနိုင်လာသောအခါ ဘိုတောက်တယောက်ထဲဘဲ ကားမောင်းပြီး လိုက်ပို့လေ သည် ။ ချမ်းသာနေပေမဲ့ စေ့စပ်သေချာပြီး အလုပ်ကို အမြဲဂရုစိုက်တဲ့ ဦးလွန်းမောင် သည်..တခါတခါသူကိုယ်တိုင်..ဘိုတောက်နဲ့လိုက်ပါလေ့ရှိပြီးသူ့ဆီက..အမြဲဝယ်ယူနေ တဲ့ဖေါက်သည်ဆိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကာ..သူတို့ဘာလိုလဲ…ဘာဖြစ်စေချင်လဲ..အဆင်ပြေ ရဲ့လား ..မေးလေ့ရှိ သည် ။ ဦးလွန်းမောင်သည်လူချစ်လူခင်ပေါပြီး..ကုန်သည်များကဦးလွန်းမောင်ရဲ့..ရိုးသားဖြောင့် မတ်မွုကြောင့် ယုံကြည်လေးစားကြ သည် ။ တနေ့ ဦးလွန်းမောင် လိုက်ပါလာပြီး ပို့နေကျ ကရာချီ ဆိုတဲ့ကုလားစားသောက်ဆိုင် ကို ရောက်သောအခါ ဆိုင်ရှင်သူဌေး ချောက်ဒရီ ..ရှိနေတာကြောင့် ဦးလွန်းမောင် နဲ့ ချောက်ဒရီတို့ တွေ့ကြ သည် ..။
ကုလားသူဌေး ချောက်ဒရီ သည် ကရာချီ စားသောက်ဆိုင်လို ဆိုင်မျိုး ၃ ဆိုင်ကို ပိုင်သူ သူဌေးတယောက် ဖြစ်ပြီး သူ့ဆိုင်တွေကို ဘိုတောက်က အပတ်စဉ် ကုန်တွေပို့ပေးနေရသည်..ဦးလွန်းမောင်ရဲ့ပွဲရုံကနေ..အများဆုံး..ဝယ်ယူနေတဲ့ဖေါက် သည် လဲ ဖြစ်လို့ ဦးလွန်းမောင် နဲ့ ရင်းနှီး ခင်မင်နေတာ ကြာပြီ …။ ချောက်ဒရီက ဦးလွန်းမောင်ကို ချပါတီ ..အာလူးဟင်း..လဘက်ရည်နဲ့ ဧည့်ခံပြီး ..သူ့အတွက် အလုပ်သမားကောင်းတယောက် လိုချင်လို့ ဘိုတောက်လို လူငယ်တယောက်လောက် ရှာပေးဖို့ ပြောလေ သည် ..။ ဦးလွန်းမောင်လဲ ..ရှာပေးပါမယ် လို့ ချောက်ဒရီကို ပြောခဲ့သည် .. ။
ထိုစဉ်က ဦးလွန်းမောင် သည် ကုလားကြီးကို အားနာလို့သာ ရှာပေးမယ် ပြောပေမဲ့ ..သူ့မှာ ဘာအကြံမှ မရှိ ..။ လူကောင်းရဖို့ကလဲ မလွယ်ဘူး ..။ နောက် သုံးလခန့်အကြာမှာ ဦးလွန်းမောင် ရဲ့ ဇနီး ဒေါ်တင်တင်မြင့် ဖက်က တော်တဲ့ သိန်းထွန်း ဆိုတဲ့ တူတယောက် ဦးလွန်းမောင် အိမ်ကို .. ရောက်လာ သည် ..။ ဒေါ်တင်တင်မြင့်က သိန်းထွန်းကို လုပ်ငန်းနားလည်ဖို့ ..ပွဲရုံမှာ အလုပ်ကူခိုင်း သည် ။ဘိုတောက် ကုန်တွေ လိုက်ပို့ရင်လဲ သိန်းထွန်း ပါ သည် .. ။ သိန်းထွန်း အလုပ်တွေ နားလည်လာတဲ့အခါ ..ဒေါ်တင်တင်မြင့် က သိန်းထွန်းက သွေးတော်စပ်တဲ့ တူမို့ ပို စိတ်ချရတာကြောင့် ဘိုတောက်ကို လူလိုချင်နေတဲ့ ချောက်ဒရီ ဆီကို ပေးလိုက်ဖို့ ပြော သည် ..။ ဦးလွန်းမောင်လဲဘိုတောက်ကို ကြိုက်ပေမဲ့ မိန်းမ ကို မလွန်ဆန်နိုင်တာ နဲ့ချောက်ဒရီ ကို ဘိုတောက်ကို လိုချင်လား မေးသည် ..။
ချောက်ဒရီကလဲ ..သူ့မှာ လူလိုနေတာနဲ့ ဘိုတောက်ကို ဝမ်းသာ အားရ လက်ခံ သည် ..။ ဘိုတောက် သည် ဆိုင် ၃ဆိုင် အတွက် လိုအပ်တာတွေ မှာဖို့ တာဝန်ခံ ဖြစ်လာ သည် . .။ ဦးလွန်းမောင်ရဲ့ ပွဲရုံမှသာမက ..အခြား သားငါးတွေလဲ မှာရ ဝယ်ခြမ်းရ သည် ..။ ဒေါ်တင်တင်မြင့်ရဲ့တူ သိန်းထွန်း ရောက်လာခြင်းဟာ ဘိုတောက် အတွက် ကောင်းဖို့ဖြစ်လာရသည် . .။ ကုလားကြီး ချောက်ဒရီ ဆီမှာ ဘိုတောက် သည် လက်ထောက်မန်နေဂျာ ဖြစ်လာရ သည် ..။ ကုလားကြီးက ကြာကြာ လုပ်လာလေ သူ့ကို စိတ်ချလာလေ ဘဲ ..။ ချောက်ဒရီမှာ မြန်မာ နံမည် ရှိ သည် .. ။ ဦးခင်မောင်စိန် ..။ လူတွေက သူ့ကို ချောက်ဒရီ ဘဲ ခေါ်ကြတာ များ သည် ..။ ဘိုတောက် သည် ကုလားများနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘာမှ အခက်အခဲမရှိ . .။
ဘာမှလဲ စိတ်အနှောက်အယှက်မရှိ ..။ သို့ပေမဲ့သူ့..ရင်ထဲမှာချောက်ဒရီရဲ့….တဦးတည်းသောသမီး..ဆိုဖီယာဆိုတဲ့.ကုလားမ ချောလေး ကြောင့်ဝေဒနာတရပ်ကို ခံစား ရ သည် ..။ ချောက်ဒရီတို့ သည် အသားဖွေးဖွေးဖြူတဲ့ မဂိုကုလားလို့ မြန်မာများက ခေါ်ကြတဲ့ လက်ရှိ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ မှာနေကြတဲ့ ပထန်ကုလား အမျိုးအနွယ် ဖြစ် သည် .။ချောက်ဒရီ ရဲ့ သမီး ဆိုဖီယာ သည် ကုလားရုပ်ရှင်တွေထဲက မင်းသမီးချော ပရီတီးဇင်တာ ..လို ရုပ်မျိုး ..။ဖြူဖွေးတဲ့ အသားအရည် ..တောက်ပြောင်ဝိုင်းစက်တဲ့ မျက်လုံး ..နှာတံပေါ်ပေါ် နွုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးနဲ့ မို့ ဘိုတောက် သည် မြင်ဘူးစ အချိန်ထဲက ရင်ထဲစွဲညိ မေတ္တာ သက်ဝင် နေပေ သည် .. ။ ဆိုဖီယာ ကို မြင်တာနဲ့သူ့ ရင်တွေက ကုလားရုပ်ရှင်ထဲကဘုံသံတွေလိုဒိန်းတပ်တပ် … ..ဒိန်းတပ်တပ် နဲ့ အခုံမြန်လာတော့ သည် ။ ဆိုဖီယာ့အလှ က ဘိုတောက်ကို ဖမ်းစားထား သည် ။
ဆိုဖီယာ ကို သူ ရေရေလည်လည်သဘောကျ စွဲလန်းနေရပြီ …. ။ ဆိုဖီယာ့ကို သူ စမြင်ဘူးတဲ့နေ့ ကို သူ မှတ်မိနေ သည် ။ ဆိုဖီယာ သည် သူ အလုပ် စ ဝင်နေတဲ့ ကရာချီစားသောက်ဆိုင်..ကို..သူ့အဖေပေးခိုင်းလိုက်တဲ့ ..ငွေထုပ် လာပို့တော့ သူက ကားအနား သွားယူ သည် . .။ ဆိုဖီယာက .. ယူက ..ဒက်ဒီ့ တပည့်အသစ် ဘိုတောက် ဆိုတာလား .. ဒို့က ဆိုဖီယာ …ဒီမှာ ဒက်ဒီပေးလိုက်တဲက ပိုက်ဆံထုပ် . . ဆိုပြီး ငွေထုပ်လှမ်းပေးသည် ..။အဲဒီတုံးက ဘိုတောက် သည် ဆိုဖီယာ့ အလှမှာ မိန်းမောနေ သည် . .။ ငေးနေသည် ..။
အာပါး . .လှလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး . .။ ချောက်ဒရီလို ထိပ်ပြောင်ပြောင် ဘိုက်ပူပူ ..နွုတ်ခမ်းမွေးထူထူ နဲ့ကုလားကြီးမှာ ဒီလောက် ချောလှတဲ့ သမီး ရှိနေတာ အံ့သြ စရာဘဲ . .။ ဟိတ်..ဘာငိုင်နေတာလဲ..ကြောင်တောင်တောင် နဲ့ . . ဆိုဖီယာက မျက်စောင်းလေး ထိုး ပြီး ပြော သည် . .။ နွုတ်ခမ်းလေး စူပြီး စကားပြောနေပုံက ကုလားကားတွေ ထဲက မင်းသမီးလေးတွေ ရဲ့ အမူအရာ နဲ့ တူနေသည် ။ဆိုဖီယာ့ အသားအရေ သညိ နို့နှစ်ရောင်လို့ ခေါ်မလား . .။ ဖြူဝင်းပြီး နုချောနေသည် ..။ . .လက်ဖျံနဲ့..လက်မောင်းမှာအမွေးနုစိမ်းဖန့်ဖန့်လေးတွေ ကို တွေ့ရ သည် ။ ဆိုဖီယာ သည် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပြီး အားကစား လုပ်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် ဘိုတောက် သူတို့ အိမ်မှ အလုပ်ရှိလို့ သွားတဲ့အခါတွေမှာ ဆိုဖီယာ့ကို အသားကပ် ဘောင်းဘီ ..ကျပ်ထုပ်နေတဲ့ တီရှပ်တွေနဲ့ တွေ့ရတတ်လို့ .. ဆိုဖီယာ ရဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကို သူ တိတ်တခိုး စွဲလန်းနေမိရပေ သည် ။
ဆိုဖီယာ လမ်းလျောက် ရင် အနောက်ဖက်ကနေ မြင်ရတဲ့ဆိုဖီယာ ရဲ့ တင်သားတွေ တုန်ခါ လွုပ်ရမ်းတာ ကို ဘိုတောက် ကြည့်ပြီး ..စိတ်တွေ မရိုးမရွ ဖြစ် ရ သည် . .။ ဆိုဖီယာ သည် ကော်ဇောပျံ ခောတ်က မဂို မင်းသမီးလေး လိုဘဲ ချော သည် . .။ဘိုတောက် သည် တဏှာစိတ်ကြွသောအခါများမှာ ..သူ့ လီးကို ကွင်းတိုက်ခါ စိတ်ဖြေလေ့ ရှိ သည် .. ။ မိန်းမပျက်များ ….ပြည့်တန်ဆာ ဖါများ ဆီကို မသွား ..။ ဆိုးဝါးလှသော အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါ ကို သူ အလွန် ကြောက် သည် ။ ထိုကဲ့သို့ ကွင်းတိုက်သောအခါ ဆိုဖီယာ သည် သူ့စိတ်ကူးထဲက မင်းသမီးကလေး ဖြစ် သည် . .။ ဆိုဖီယာ သည် မဂိုဘုရင်ကြီး ရဲ့ သမီးတော်လေး ဖြစ်ပြီး သူ သည် သက်တော်စောင့် ကိုယ်ရံတော် ပေါ့ . .။ ဘိုတောက် သည် ဂျီးများ သူ မဟုတ်တာကြောင့် အစားလဲ ဘာနဲ့ .. စားစား ရ သည် ..။ဝက်သားမစားရလို့လဲ ဘာမှ မဖြစ် ..။စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းမို့ သူ သည် မနက် ည ဘာမှ စားဖို့သောက်ဖို့ မပူရ …။
ချောက်ဒရီ ပေးတဲ့ လစာ သည် အသားတင် စုမိ သည် ။ ဦးလွန်းမောင် ဆီမှာ နေရတုံးကထက် ပို အဆင်ပြေလေ သည် . .။ ဘိုတောက် သည် တောက လာတုံးကနဲ့တခြားစီ ဖြစ်လာ သည် . .။ ရန်ကုန်ရည် လည်လာသည် သာမက အလကားမနေဘဲ …ညတိုင်းလဲ စာဖတ်.. . .မသိတာ မတတ်တာ လေ့လာခဲ့တာမို့ ..ဘိုတောက် သည် အရင်တုံးက တောသား ငအ မဟုတ်တော့ .. ။ ကုလားစကားလဲ ..မွတ်နေအောင်..ပြောဆိုလာနိုင် သည် ..။ ဘိုတောက် သည် ချောက်ဒရီ ရဲ့ အိမ်ကို အမြဲ ဝင်ထွက်နေရ သည် . .။ ချောက်ဒရီ ရဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများသာမကချောက်ဒရီရဲ့ဇနီးမယား ..ဒေါ်ဘီဘီ နဲ့ ဆိုဖီယာတို့ကိုလဲ ကူညီရ သည် ..။ ချောက်ဒရီ့ အိမ် မှာ ..သူ့ ကားလဲ ဆေးပေးရ သလို ..အိမ်မှာဆေးသုတ်စရာလိုလဲ သုတ် ..မြက်ရိပ်စရာရှိလဲ ရိပ်ရ သည် ….။
အီစွတ် ဆိုသော ကားဒရိုင်ဘာ ရှိနေပေမဲ့ အီစွတ်ကို အဖိုးကြီး ခေါ်ခိုင်းထားသောအခါများမှာ ……ဘိုတောက် သည် ဘီဘီ သွားလိုရာကို ကားမောင်းပို့ပေးရတတ် သည် ..။ ဘီဘီ သည် ဖင်ပေါ့သော ဘိုတောက် ကို ခိုင်းရတာ သဘောကျ သည် . .။ ဘိုတောက် ကို ပဲဟင်း . .အာလူးဟင်း ..ဆိတ်သားဟင်း ချက်နည်းတွေ သင်ပေးပြီး ထမင်းချက် ဒေါ်ဇီ မရှိတဲ့ ရက်တွေ ဆိုရင် ဘိုတောက်ကို ချက်ခိုင်း တတ် သည် ..။ ဘီဘီ ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တွေ ကိုလဲ ဘိုတောက် ခိုးခိုးကြည့်မိရ သည် .။ ဘီဘီ သည် ဘိုတောက် ရှေ့ ခဏခဏ ထမိန် ပြင်ဝတ်တတ်ရာ သူမ သည် အိမ်မှာ နေရင်းဆိုလျှင် အောက်ခံ ဘောင်းဘီ မဝတ်တတ်တာမို့ ဘီဘီ ရဲ့ စောက်ဖုတ်မို့မို့ကြီးကို ဖျတ်ကနဲဖျတ်ကနဲ ..ဘိုတောက် မြင်တွေ့ရ တတ် သည် ..။
ဘီဘီ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် အမွေး ရိပ်ထားပုံရ သည် . .။ ပြောင်ရှင်းနေသည် …။ ဝင်းဖြူလွန်းသော သူမ အသားအရေကြောင့် ..သူမ ဖင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးတွေကို ဘိုတောက် မြင်ရသောအခါ ..ဒီဖင်ကြီးတွေကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ် ဆုတ်နယ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ တဖွါးဖွါး ပေါ်ပေါက်ရပေ သည် ..။ ဘီဘီ သည် ချောက်ဒရီထက် အသက်အများကြီးငယ် သည် ..။ ဘီဘီ သည် လဲ ရုပ်ချောချော ..ကိုယ်လုံးလှလှ မဂို ကုလားမ တယောက် ဖြစ်သည် ဘီဘီ ချောလို့ သူမ သမီး ဆိုဖီယာက အမေနဲ့တူပြီး ဒီလို အလှပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်ရ သည်လို့ လူတွေက ပြောဆိုကြ သည် . . ။ ဘီဘီ ကြောင့် ဘိုတောက် ခဏခဏ လီးတောင်ကာ စိတ်တွေ ထရ သည် ..။တခါတလေ ဘီဘီ သည် မီးဖိုထဲ သူ့ကို လာကူခိုင်းရာ သူမ အောက်စ .. လွတ်တာကို တွေ့ရသောအခါများမှာ အမွေး ပြောင်အောင် ရှင်းထားတဲ့ ဘီဘီရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ကြောင့် ဘိုတောက်ရဲ့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်ကာ ဘီဘီ့ကို တက်လိုးပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ရလေသည်.။.
ကိုယ့်အလုပ်ရှင်ရဲ့မိန်းမဖြစ်တာ ကြောင့်မကောင်းတတ်တာရယ်…သဘောမတူဘဲအော်လိုက်ရင်..ထောင်ထဲရောက်သွား နိုင်တာရယ်ကြောင့် မသိချင်ယောင်ဆောင် ကာ နေခဲ့ရပေ သည် ။ ချောက်ဒရီ နဲ့ ဦးလွန်းမောင် ထပ်တွေ့ကြတော့ . .ချောက်ဒရီ က ဘိုတောက် ကိုရတာ ကံကောင်းကြောင်း ..သဘောကျကြောင်း ..ဦးလွန်းမောင်ကို ပြော သည် ။ ဦးလွန်းမောင် က ဘိုတောက် သည် လူကောင်း ဖြစ်ကြောင်း ကြားရလို့ ဝမ်းသာကြောင်း ပြောလေ သည် …။ ဘိုတောက် သည် ချောက်ဒရီ ရဲ့ ဆိုင်သုံးဆိုင်အနက် က တဆိုင် ဖြစ်တဲ့ .. လာဟော စားသောက်ဆိုင် မှာ စာရင်းအင်းများ လုပ်နေခိုက် . .ချောက်ဒရီ ဆီက ဖုန်းလာ သည် ..။
ချောက်ဒရီ နဲ့ ဖါတမာ သည် ပဲခူးမှာ ရောက်နေလို့ သူတို့ အိမ်ကို ပြန်ပြီး သမီး ဆိုဖီယာ့ ကို ကျူရှင် ပို့ခိုင်း သည် .။ ဒရိုင်ဘာ အီစွတ် သည် ချောက်ဒရီတို့နဲ့ ပါသွားလို့ ဖြစ်သည် ။ ချောက်ဒရီ မိသားစု သည် ဘိုတောက်ကို ခိုင်းချင်ရာ ခိုင်း သည် ..။ သူတို့ ခိုင်းပိုင်သည် လို့ ထင်ကြ သည် ..။ ဘိုတောက်ကလဲ ဘာခိုင်းခိုင်း လုပ် သည် မို့ ကုလားမိသားစု နဲ့ ကိုက်နေ သည် .။ ဘိုတောက်လဲ ဆိုဖီယာနဲ့ တွေ့ရမှာမို့ အထူး ဝမ်းသာ သဘောကျပြီး ချောက်ဒရီ ရဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ..တိုယိုတာ ဟိုင်းလပ်စ် ကားကြီး နဲ့ချောက်ဒရီနေတဲ့ ဘောက်ထော် ကို အမြန် ပြေး သည် ။ ချောက်ဒရီ သည် ဘောက်ထော် မှာ ခြံကျယ်ကျယ် နဲ့ ကြီးမားတဲ့ တိုက်ကြီးနဲ့နေ သည် ..။
သူ ရောက်သွားတော့ ..အိမ်ကြီး ရဲ့ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကို နှိပ်ပေမဲ့ ဘယ်သူမှ တံခါးလာမဖွင့်လို့ ..သူ့ကိုပေးထားတဲ့အိမ်သော့အပိုနဲ့ ဖွင့်ဝင်လိုက် သည် ။ ထမင်းချက် ဒေါ်ဇီ လဲ မတွေ့ …။ ဘိုတောက် .. ဆိုဖီယာ..ဆိုဖီယာ .. လို့ အော်ခေါ်ကြည့်တော့လဲ ..ဘာသံမှမကြားလို့အိမ်အပေါ်ထပ်ကို..တက်သွားလိုက် သည် …။ အပေါ်ထပ်ရောက်တော့ ဆိုဖီယာ ရဲ့ အခန်းဘက် က ရေကျသံတွေ ကြားရ သည် ..။ သူမအခန်းတံခါး က ခပ်ဟဟ ဖြစ်နေပြီး ပိတ်မထားလို့ အထဲကို ကြည့်မိလိုက်တော့ ..ဆိုဖီယာ့ ရေချိုးခန်း သည် အိပ်ခန်း ထဲမှာ ရှိနေသည် ..။ ရေချိုးခန်းထဲက ရေကျသံတွေ ကြားရ သည် . .။ဆိုဖီယာရေချိုးနေ တာဘဲ . .။ ဒါကြောင့် လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုရော ..အော်ခေါ်နေတာကိုရော မကြားတာ ဖြစ်မည်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကတော့ ပိတ်ထား သည် ..။
ဘိုတောက် သည် ဆိုဖီယာ သည် ကိုယ်တုံးလုံး ချိုးနေမှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နွုံး . သေချာသလောက် ဖြစ်နေတာကြောင့် ..ဖြူဝင်းတောင့်တင်းတဲ့ ဆိုဖီယာ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အ ဝတ်မပါဘဲ မြင်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ တဖွါးဖွါး ပေါ်ပေါက်လာရ သည် . .။ အကယ်လို့ သွားချောင်းတာ မိလိုက်ရင်လဲ အလုပ်လဲ ပြုတ် .. နံမည်လဲပျက်. မည် . ။.အခန့်မသင့်ရင် ထောင်နန်းစံရအုံးမည် ။ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ကာ ဆိုဖီယာ့ အခန်းပေါက်ဝမှာ တွေတွေကြီး ရပ်နေမိ သည် ..။ သည်အချိန် မှာ ဗြုံးကနဲ ဆိုဖီယာ့ ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်လာသည် ..။ အို . . . ဟယ် . . . ဆိုဖီယာ သည် ရုတ်တရက် ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာ သည် ။ သူမ သည် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ရေသုတ်ရင်း ..ထွက်လာသည် ။ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်လို့ ဘိုတောက် သည် ဆိုဖီယာ ရဲ့ ကိုယ် ရှေ့ခြမ်းတခုလုံးကို တွေ့လိုက်ရ သည် …။ ဆိုဖီယာ့ ကော့ထောင်ဖီးထ..ဝင်းမွတ်နေတဲ့နို့တွေကအပြေးကလေး..ထွက်လာလို့..တုန်ခါနေ ကြ သည် …။
ပေါင်တန်ရှည် ဖွေးဖွေး ဖြူဖြူ ကြား ဆီးခုံ ဖေါင်းဖေါင်း မို့မို့ကြီးက အမွေးအမြင် မရှိ …။ ရှင်းနေ သည် . .။ဖေါင်းဖေါင်းအိအိ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် အလယ်ခေါင်မှာ နီညိုညို အကွဲကြောင်းကြီး နဲ့ . .။ ဆိုဖီယာလဲ ဘိုတောက်ကို တွေ့တော့ ရှက်လန့်တကြား အနောက်ကို ပြန်လှည့်ကာ..လာရာရေချိုးခန်းထဲ ပြန် ဝင်ပြေး သည် . . .။တုန်ခါ လွုပ်ရမ်းသွားတဲ့ ဆိုဖီယာရဲ့ ဖင်တုံးတွေက ဘိုတောက် စိတ်တွေကို ဝုန်းကနဲ ထကြွသွားစေ သည် ..။ ဆိုဖီယာ့နောက်ကို ပြေးဝင် လိုက်သွားမိ တော့ သည် . .။ ဆိုဖီယာ သည် ရေချိုးခန်း တံခါးကို အမြန် ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ ဘိုတောက် က ဆိုဖီယာ့ အနားကို ရောက်နေပြီ …။ ဟိတ်..ဘိုတောက် . .ထွက်..ထွက် . ..ဘာလုပ်တာလဲ . . ဆိုဖီယာ သည် ဘိုတောက် ရဲ့ပေါင်ကြား လုံချည်အောက်က ထောင်ထနေသော အတန်ကြီးကို တွေ့သွား သည် ။ ဘိုတောက် ရဲ့ လီးကြီး မတ်မတ်တောင်နေ သည် . ..။
ဆိုဖီယာက ဘိုတောက်ကို တွန်း ထုတ် သည် . . .။ နေပါအုံး..ဆိုဖီယာ ရယ် . .နေပါအုံး . . သွား . .နင်..နင်…မကောင်းဘူး . . .ခု ထွက်သွား . . ဘိုတောက် သည် ကာမဘီလူး စီးနေပြီ . .။ မရတော့ . .။ မုန်ယိုနေသော ဟိုင်းဆင်ကြီးတကောင် လို . .ဆိုဖီယာ့ကို အတင်း ဝင်ဖက် လေပြီ ။ ဆိုဖီယာ့ ကိုယ်ပေါ် လွမ်းထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါလေးကို ဘိုတောက် တအားဆွဲယူလိုက် သည် . .။ ဆိုဖီယာ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ ..။ဖြူ ဖွေး အချိုးကျသော ဆိုဖီယာရဲ့ အတွင်းပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို ဘိုတောက် မြင်ရတော့ စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်တော့ပါ . . ။ ဆိုဖယာရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးကို ဘိုတောက် ဆွဲဖက် ကာ သူမ ရဲ့ နွုတ်ခမ်းထူပြဲပြဲလေးကို သူ့နွုတ်ခမ်းကြီး နဲ့ငုံစုတ်လိုက်သလို သူ့လက်တွေက ဆိုဖီယာ့ ဖင်တုံးအိအိကြီးတွေကို ကိုင်ညှစ် နေမိပြီ ..။
အို . .ဟင့်ဟင့် . .ဘိုတောက် . ..သိပ်ဆိုးတာဘဲ . .ပါပါ နဲ့တိုင်လိုက်ရမလား . . ဘာတွေလာလုပ်နေတာလဲ . . . ဆိုဖီယာကို စွဲလန်းနေတာ ကြာပါပြီ . .ဆိုဖီယာကို ကျနော် သိပ် ချစ်မိနေတယ် . . ချစ်တာ နဲ့ ဒီလိုလုပ် ရသလား . . ဘိုတောက်က ဘာမှ ပါးစပ်က ပြန်မပြောဘဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြတော့သည် . .။ ဆိုဖီယာကို ရေချိုးခန်းထဲကနေ အိပ်ခန်းထဲ ကို ခေါ်ဆောင်သွား လေ သည် . .။
ဟဲ့..ဘိုတောက် . .ငါ့ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး ဘာလုပ်မလို့လဲ . . . ချစ်မလို့ . .ဆိုဖီယာ့ကို ချစ်မလို့ … ဆိုဖီယာ့ နို့တွေက ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကော့နေ သည် ..။ နို့သီးလေးတွေက ပန်းနုရောင် …။ အို..ဟဲ့ . . .ဟာ…အာ . .နို့တွေကို ဘာလို့လာစို့နေပြန်တာလဲ . .. အို . .ဘိုတောက် . ..အင်….အင်…အ….အ…..ရှီး…အား…..ရှီး .. . .. . . ဆိုဖီယာ့ နို့သီးနီညိုညိုလေးတွေကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့နေတောက ဆိုဖီယာ ခါးလေးကော့ကာ မျက်တောင်တွေ စင်းကျသွားရ သည် .. ။သူမ ပေါင်တန်သွယ် နှစ်ဖက်ကို ဘိုတောက်က ဆွဲဖြဲကား လိုက်တာကိုလဲ သိနေပေမဲ့ ဆိုဖီယာ .. မတားဆီးတော့ပေ . .. ။ တအင်းအင်း နဲ့ဘဲ ညည်းနေ သည် …။ ချစ်တယ် ဆိုဖီယာရယ် . . .အရမ်း ချစ်တယ် . .ဆိုဖီယာ မျက်လုံး စုံပိတ်ထား ချိန် ဘိုတောက် သည် ဆိုဖီယာ ရဲ့ ပေါင်ကြားကို မျက်နှာအပ်ပြီး သူမ ရဲ့ အမွေးမရှိဘဲ ပြောင်ဝင်းနေတဲ့ စောက်ပတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို အငမ်းမရဘဲ နမ်းပါတော့ သည် .။
“ အို…ဟင့်…..ဘို…ဘိုတောက်…ဘာ…ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ . . .” ဘိုတောက်က ဘာမှပြန်ဖြေမှာ မဟုတ် ..။ သဲသဲမဲမဲ . .နမ်းရွုံ့နေ သည် . .။ဆိုဖီယာ ..ထွန့်ထွန့်လူးနေ သည် . .။ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသည် . .။ ဘိုတောက် ရဲ့ အနမ်းအယက်အစုတ်တွေကြောင့် ဆိုဖီယာ .ဖင်ကြီးတွေ ဘယ်ညာရမ်းခါနေရပြီ . .။ စောက်ပတ် ယက်နေစဉ် ဘိုတောက် လက်နှစ်ဖက်က ဆိုဖီယာ့ ဖင်တုံးတွေကို ဆုတ်နယ်လိုက် ..နို့ကြီးတွေကို ပွတ်သပ်လိုက် နဲ့ အလုပ်များနေ သည် . .။ ဆိုဖီယာ မှာ ဘိုတောက် ရဲ့ ဆွနေတာတွေကြောင့် စောက်ပတ်ထဲ ယားသထက်ယားလာရ သည် . .။ ဘိုတောက် ရယ် . .ဘာတွေ နှိပ်စက်နေတာလဲဟာ . . . နှိပ်စက်တာ မဟုတ်ဘူး …ဆိုဖီယာ့ကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေတာ . . အရမ်း အနေရ ခက်နေပြီ . . ဘိုတောက် လဲ ဆိုဖီယာ အရမ်း ယားနေပြီ ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပြီး ဆိုဖီယာ့ ပေါင်ကြားမှာ နေရာ ဝင်ယူလိုက်ပြီး သူမ ပေါင်တန်တွေကို ဘေးတဖက်တချက်ကို တွန်းခွဲကာ ဖြဲလိုက် ပြီး သူ့လီးဒစ်ပြဲကြီးကို သူမ စောက်ပတ်အပေါက်မှာ တေ့လိုက် သည် . .။
ဆိုဖီယာ ရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးမှာ စောက်ရေတွေ နဲ့ စိုစိုရွဲ နေသည် မို့ ဘိုတောက် လီးထိုးသွင်းလိုက်သောအခါ . .တင်းကနဲ ဒစ်ခေါင်းမြုပ်ရုံ ဝင်သွားပေမဲ့ လီးအတေါ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ ဆိုဖီယာကတော့ ကြောက်လန့်ပြီး ..ဘိုတောက် ရင်ဘတ်ကို တွန်းလိုက်သည် ။ အား . . ..ဖြေးဖြေး . .ကြောက်တယ်. . . ဘိုတောက် က တော့ ဆိုဖီယာ့ နို့တွေကို ဟတ်ငုံလိုက်ပြီး စို့နေ သည် . .။ သူ့ လီးမဲမဲကြီး သည် ဆိုဖီယာ့ စောက်ပတ်ထဲ အတင်းကြီး တိုး ဝင်နေသည် . .။ တအင်အင်…ညည်းငြူရင်း …ဆိုဖီယာ သည် ဒါကြီး သူမ စောက်ပတ်ထဲ .. ထိုးတာကိုလဲ ကျေနပ်သဘောကျနေပေ သည် . .။
အပျိုပေါက်ဘဝထဲက စိတ်ကူးယဉ် စိတ်မှန်း နဲ့ လက်ဝါးစောင်းနဲ့ ပွတ်တိုက်လိုက် . .ခဲတံတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ထိုးထည့်လိုက် . .စောက်စေ့ကို ပွတ်ချေလိုက် နဲ့ တကိုယ်ရည် အာသာဖြေ စဉ်က ယောင်္ကျား လီးကို လိုလား တောင့်တ ခဲ့ရ သည် ဘဲ . . ။ ဘိုတောက် ကိုလဲ ဆိုဖီယာ သည် တိတ်တခိုး စိတ်ဝင်စားမိခဲ့ရတာက ဘိုတောက် သူတို့အိမ်မှာ မြက်ရိပ် ..ကားရေဆေး . .အမေဖြစ်သူ ဘီဘီကို ဟင်းဝိုင်းချက် အပြီး ဘိုတောက် သည် ကားဂိုဒေါင်မှာ ရှိနေတဲ့ ရေချိုးခန်းလေးမှာ ရေချိုး တုံးက သူမ သည် ဘိုတောက် ရေချိုးတာကို ချောင်းမြောင်းခဲ့ ဘူးခဲ့ရာ ..ဘိုတောက် လီးကို တွေ့မြင်ဘူးခဲ့ပေ သည် . .။
ထိုစဉ်အခါထဲက ..ဘိုတောက်ရဲ့ လီးမဲမဲကြီးကို ကြည့်ကာ စိတ်တွေ ထ ခဲ့ ကြွ ခဲ့တာပါ . .။ ဒီလီးမဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီး ကို ညတိုင်း . .မြင်ယောင်ပြီး ဒါကြီးနဲ့ အသွင်းခံရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ . .ဆိုတဲ့ . .စိတ်ကူးယဉ် ကာ မိမိဖါသာ ပွတ်ပြီး အာသာဖြေနေခဲ့ ရတဲ့ ညတွေ များခဲ့လေ သည် . .။အခုတော့ သည် လီးတုတ်တုတ်ကြီး သည် သူမ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးသွင်းထားနေမိရပြီ . .။ စောက်ပတ်ထဲက တစိမ့်စိမ့် ယားကာ အရေများက ထွက်ပြီးရင်း ထွက်ရင်း . .. ဖြစ်နေရ သည် . .။ အို . .လီးကြီး လွုပ်လာပြန် သည် . .။ ထိုးမဲ့ဆင် နောက်တလှမ်း ဆုတ် ဆိုသလို . .လီးကြီးကို ဘိုတောက် က ဆုတ်လိုက် သွင်းလိုက် လုပ်နေ သည် . .။ ဘယ်ညာ နှဲ့ကာ နှဲ့ကာ နဲ့ဖပ်ကနဲ ထိုးထည့်ပြန် သည် . . .။ လီးကြီး လွုပ်လိုက်တိုင်း သူမ အဖို့ အရသာ ထူးကဲ ရ သည် . .။လီးကြီးက သူမ စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်မိနေတာကြောင့်ပေါ့ . .။
အရသာ ကောင်းကောင်း သွားတော့ ..ဆိုဖီယာ ကိုယ်တိုင်က လွုပ်ချင်လာ သည် . .။ ဘိုတောက် လဲ ဝင်သမျှ လေး ထိုးလိုက် ဆုတ်လိုက် နဲ့ လိုးနေ သည် . .။ ကြာလာတော့ . .ကျင့်သားရလာသည် ။ လိုးလို့ရလာ သည် ။ ကောင်းသထက် ကောင်းလာ သည် . .။ အား…အင့်အင့်……အို…အို .. . ဟင်း . . .ဟင့် . . ဖွတ်…ဖပ်..ဖွတ်..ဖပ် ……ဖွတ် . . .. ဆိုဖီယာ ရဲ့ ညည်းညူသံတွေနဲ့အတူ စောက်ပတ်နဲ့လီး ..အသွင်းအထုတ် လုပ်ချိန်မှာ ဖွတ်ဖွတ် . .ဖပ်ဖပ် အသံတွေ ထွက် သည် . . .။ လိုးခြင်းရဲ့ ကောင်းခြင်း အရသာ ကို ဆိုဖီယာ ရရှိခံစားနေရပြီ . .. ။ အော် ..ဒါကြောင့် လူသားတွေ လိုးကြတာကိုး . .လို့ ဆိုဖီယာ တွေးမိရ သည် .. ။ ဘိုတောက် ကတော့ ပန်းတိုင် ရောက်ရေး ..ဦးတည်နေ သည် . .။ ဆိုဖီယာ့ စောက်ပတ် အတွင်းသားတွေက အိနေ သည် . .။ တင်းကျပ်တဲ့ အရသာထူးကြောင့် ဘိုတောက် ခဏလေး နဲ့ပြီးချင်လာရ သည် .။
ဆိုဖီယာ့ပေါင်တန်တွေကို အပေါ်ကို ထောင်တွန်းရင်း သူ့ လီးကို ထိုးဆောင့်လေတော့ရာ မကြာခင်မှာဘဲ သုတ်တွေ ပန်းထွက်ခါ ပြီးဆုံးခြင်း ကို ရောက်သွားရတော့ သည် ။ ဘိုတောက်ရဲ့ မျက်နှာက ချွေး စက်တွေ သည် ဆိုဖီယာ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကို တောက်ကနဲတောက်ကနဲ ကျ လာ သည် . .။ ဆိုဖီယာ သည် မျက်လုံးတွေ ပိတ်ခါ . .ငြိမ်နေ သည် . .။ ဘိုတောက် က သူ့ လီးကို ဆိုဖီယာ့ စောက်ခေါင်းထဲက မထုတ်သေး . .။ ဘိုတောက် သည် ဆိုဖီယာ့ကို မထင်မမှတ်ဘဲ လိုးခွင့်ရလိုက်ပြီး ..နောက်ထပ် ဘယ်တော့များ ထပ်ပြီး အခွင့်အရေးရမလဲ စောင့်မျှော်နေခဲ့ပေမဲ့ ..ထပ်ဆုံတွေ့ကာ လိုးနိုင်ခွင့် မရရှိသေးပေ ။ ထိုနေ့က ..ဆိုဖိယာ နဲ့သူ နောက်ထပ် တကြိမ် ထပ်ပြီး လိုးကြသေး သည် .. ။ ဒီလို ဘိုတောက် အခွင့်အရေး စောင့်ချောင်းနေသလိုဘဲ ဆိုဖီယာ သည် ဘိုတောက် နဲ့ လိုးတဲ့ အရသာကို ပြန်လည် စဉ်းစား သတိရ ..မြင် ယောင်ပြီး ဘိုတောက် ရဲ့ အလိုးကို ထပ်ခံချင်နေမိရ ပေ သည် . .။ ချောက်ဒရီ ရဲ့ ညီမ တဦး ဖြစ်တဲ့ ..ဇိနပ် သည် ညောင်လေးပင်မြို့က လာလည်ပြီး အပြန်မှာ ဆိုဖီယာ့ကို ညောင်လေးပင်ကို အလည် ခေါ် သည် ..။
ဆိုဖီယာက မလိုက်ချင်လှပေမဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ က အတင်း တိုက်တွန်းလို့ အဒေါ် ဖြစ်သူ အန်တီ ဇိနပ် နဲ့ ပါသွားရ သည် . .။ ချောင်ဒရီ လဲ မေမြို့က သူ့ အမျိုးတွေက မေမြို့ မှာ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့် ရန်အတွက် လာပြီး လေ့လာစေချင်ကြောင်း အတင်း ခေါ်ကြတာနဲ့ မေမြို့ကို သွားရ သည် . .။ ဘီဘီ ဘဲ လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစီးဖို့ ကျန်ခဲ့ သည် . .။ ဘီဘီ သည် ဘိုတောက် ရှိနေတာကြောင့် ဘာမှ ထွေထွေ ထူးထူး လုပ်စရာ မလိုဘဲ ..အိမ်မှာ ဟင်းချက် လိုက် ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်လိုက် နဲ့ ဇိမ်ကျနေ သည် ။ ထမင်းချက် ဒေါ်ဇီကို လဲ ခင်ပွန်းသည် ချောက်ဒရီ နဲ့ သမီး ဆိုဖီယာ တို့ မရှိခိုက် ..အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက် တာမို့ ထမင်းချက် ဒေါ်ဇီ လဲ ဝမ်းသာအားရ သူမ ဇာတိ ပဲခူးမြို့ကို ပြန်သွား သည် …။ ဘိုတောက်လဲ ဆိုင်၃ ဆိုင်နဲ့ အလုပ်များနေ သည် ..။
သူ့ .. ဘော့စ်အဟောင်း ဦးလွန်းမောင် ပွဲရုံက သူတို့ လိုအပ်တဲ့ ကုန်တွေ မှာရ သည် .. ။ ဘိုတောက် ကရာချီ ဆိုင် မှာ ရှိနေတုံး ..လာပို့တာ ..အရင် သူနဲ့ အတူတူ ကုန် ပို့ဘူးတဲ့ဒရိုင်ဘာဦးစ ဖြစ်နေသည် . .။ သိန်းထွန်း ဆိုတဲ့ လူ ကို မတွေ့လို့ ဦးစကို မေးကြည့်တော့ ..သိန်းထွန်း က ငွေတွေ အလွဲသုံးစား လုပ်လို့ မိတော့ .. ဦးလွန်းမောင် အလုပ် ထုတ်ပစ်လိုက် သည် . .တဲ့ . .။ ဦးလွန်းမောင် လဲ ဘိုတောက်လို လူကောင်းကို ကုလားကြီး ချောက်ဒရီ ကို ပေးပစ်မိတာ မှားပြီ လို့ ညည်းညည်းနေ သည် လို့ ဦးစက ပြောပြ သည် . . .။
ဘိုတောက် လဲ ဦးလွန်းမောင် အတွက် စားစရာများ ..ဦးစ နဲ့ ထည့်ပေးလိုက် သည် ….။ ညနေစောင်းမှာ ဘီဘီ မှာထားတဲ့ ပစ္စည်းတချို့ သွားပို့ သည် . .။ ချောက်ဒရီ ရဲ့ မာစီဒီးကားနက်ကြီး ..ဘီဘီ စီးနေကျ တိုယိုတာ ခရက်စီဒါကားကြီးတွေ သည် တိုက်ကြီး ဆင်ဝင်အောက်မှာ ရပ်ထားကြလို့ ဘိုတောက် လဲ သူမောင်းလာတဲ့ ဟိုင်းလပ်စ်ကားကြီးကို ခပ် ဝေးဝေးမှာဘဲ ရပ်လိုက်ပြီး ဆင်း လျောက်သွား သည် ..။ သူ့မှာ အိမ်သော့အပိုပါလို့ ..တံခါးဘဲလ် တီးမနေတော့ဘဲ သူ့ဖါသာ ဖွင့်ဝင်လိုက် သည် . . ။ အထုပ်တွေ ပွေ့ပိုက်ပြီး အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တာ နဲ့ ..အပေါ်ထပ်မှ.. ထူးခြားတဲ့အသံတွေကို သူ ကြားလိုက်ရ သည် …။ တချို့ က ခြင်ထောင်သံ လို့ ခေါ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကြားရတဲ့ အသံတွေ . .။
အတိအကျဆိုရရင်..မိန်းမရဲ့ညည်းသံ..ယောင်္ကျားရဲ့တအင်းအင်းတရွူးရွူးနဲ့အားယူသံ.. . . ဆောင့်တာညှောင့်တာတွေကြောင့် ကုတင်တကျိကျိ မြည်တဲ့အသံ . .. နဲ့ လီးနဲ့ စောက်ပတ် အ ဝင်အထွက်မှာ မြည်တဲ့ …တဖွတ်ဖွတ် တဖပ်ဖပ် . . အသံတွေပါ ဘဲ . . .။ ဟိုက် …ချောင်ဒရီ လဲ မရှိ ..။ ချောင်ဒရီတို့ အိပ်ခန်းကြီးထဲက အသံတွေ ဖြစ် နေလို့ ဘိုတောက် အရမ်း .. စိတ်ဝင်စားသွား သည် …။ အိပ်ခန်းထဲကို ဘိုတောက် ချောင်းကြည့်လိုက် သည် . ..။ အိုး . . ဘီဘီ နဲ့ ဒရိုင်ဘာ အီစွတ် ပါလား . .. ။ ဘိုတောက် . . တကယ့်ကို အံ့သြ သွား သည် .. ။ ဘီဘီ သည် ကုတင်စောင်းမှာ လေးဘက်ကြီးကုန်းလျက် ..အီစွတ်က ဘီဘီရဲ့ ခါးကို ဆွဲဆွဲပြီး အနောက်မှ လိုးဆောင့်ပေးနေ ပါ သည် . .။ ဘီဘီ ရဲ့ ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေ သည် ဆောင့်လိုက်တိုင်း ..တုန်ခါနေ သည် .. ။
အီစွတ် ရဲ့ လီး သည် တော်တော်ရှည် သည် .. ။ ထူးဆန်းသည်မှာ ဘီဘီ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် သမီး ဆိုဖီယာ ရဲ့ စောက်ဖုတ်လိုဘဲ အမွေးမရှိဘဲ ကတုံး ဖြစ်နေသည် .. ။ ဘိုတောက်တို့ တောမှာက စောက်ကတုံး လို့ ခေါ်တဲ့ အမွေး မဲ့ စောက်ဖုတ် ပေါ့ .. ။ ရိပ်ထားသလား ….နုတ်သလားတော့ မသိ ..။ ဆောင့်..အီစွတ်…ဆောင့်..နာနာဆောင့် . .. ငါ ပြီးခါနီးပြီ . .. ဖွတ်..ဘွတ်..ဖပ်..ဖွတ်..ဖပ်…အင်း…အင်း…..အား…ဆောင့်…ဆောင့်…….. အီစွတ် သည် လူပိန်သလောက် လီးက ကြီး သည် ..။ အီစွတ် သည် ဒီလို လုပ်မယ် လို့ မထင်ရ ..။ ကျိုးနွံသော အလုပ်သမား တယောက် ပုံစံ နဲ့ အီစွတ် သည် သူ့ ဘော့စ် ရဲ့ မိန်းမ ကို ရေရေလည်လည် လိုးနေ သည် .။
ဘိုတောက် သည် ဘီဘီ နဲ့ အီစွတ်တို့ အပီအပြင် လိုးနေကြတာကို ကြည့်ပြီး ကာမမီးတွေ တောက်လောင်လာပြီ .. ။ သူ့ လီးကြီး မှာ မတ်မတ်တောင် နေပြီ . .။ အီစွတ် သည် ဘီဘီ့ စိတ်ကြိုက် အားသွန်ပြီး ဆောင့်လေသည် . .။ အီစွတ်ရဲ့ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ေ၈ွးစိနှစ်လုံး သည် ဘီဘီ့ ဖင်ကြားကို ဗျတ်ကနဲဗျတ်ကနဲ ဆီးချက် မှန်မှန် ရိုက်ခတ်နေ သည် . .အီစွတ်ရဲ့လီးမဲမဲကြီး..ဖါတမာ့စောက်ပတ်ကြီးထဲ အဝင်အထွက် လုပ်နေတာကို မြင်ရတဲ့ ဘိုတောက်မှာ ..သူကိုယ်တိုင် အခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး ဘီဘီ့ ကို တက်လိုးပစ်ချင်လာ ရ သည် . .။ နဂိုထဲကမှ ဘီဘီ့ ကို သူ လိုးချင်နေတာ . .။ ဘီဘီ သည် တောင့်တင်းစိုပြေဆဲ . .ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆေးငါးကြီး ဖြစ် သည် . .။အီစွတ် သည် ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်ကာ ပေပေတေတေ နံနံစော်စော် နေသော ကုလားတယောက် ဖြစ် သည် ..။ ဘီဘီ သည် အရမ်းကို ဆာနေလိုက အီစွတ်လို ကုလားကို ကုန်းတာ ဖြစ်မည် . .။
ဒီအချိန်မှာ ဘီဘီ သည် ပြီးချင်လာလို့ လေးဘက်ထောက် ကုန်းပေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြီးလေ့မရှိတာကြောင့် .အီစွတ်ကိုသူပက်လက်လှန်ပေးမည်. .သူ့..ခြေထောက်တွေကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီး လိုးပေးဖို့ ပြောလိုက်ပြီး ..ကုန်းနေရာ က ပက်လက်လှန် အိပ်လိုက် သည် . .။ သူမ ပေါင်တန်ဖြူကြီးတွေ ကို အစွမ်းကုန် ကားပေးလိုက် ပြီး .. “လိုးစမ်း အီစွတ် . .ငါ ပြီးချင်နေပြီ . .တအား ဆောင့်ပေးစမ်းဟာ . .”လို့ အီစွတ်ကို အမိန့်ပေးလေ သည် ..။ အီစွတ်လဲ ချွေးတွေ စီးကျနေအောင် လိုးဆောင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ဘီဘီ က ကာမလမ်းဆုံးကို မရောက်သေးလို့ . .ဟောဟဲဟောဟဲ နဲ့ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီး နှစ်ချောင်းကို သူ့ ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်ပြီး …သူ့လီးမဲမဲရှည်ရှည်ကြီးကို ဘီဘီ့ အ ရေတွေနဲ့ စိုရွဲပြောင်လက်နေတဲ့ စောက်ပတ်ကြီးထဲ ထိုးသွင်းလိုက်ပါ သည် . .။ စိုရွဲ ပြောင်လက်နေတဲ့ ဘီဘီ့ စောက်ပတ်ကြီးထဲ ဗျိဘွတ် ဆိုပြီး အီစွတ် ရဲ့ လီးတန် ကြီး ဝင်သွား ချိန် ဘီဘီ သည် အခန်းဝကို မျက်နှာပြုထားပြီမို့ ချောင်းနေသော ဘိုတောက်ကို တွေ့သွားလေ သည် .. ။ ဘိုတောက်ကလဲ ..သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ ပွတ်တိုက်နေရင်း . .ဘီဘီ နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံမိ သည် . .။
အီစွတ်ကတော့ အားကူန် လိုးဆောင့်ပေးနေ သည် ..။ သူ့လီးတန်ကြီးကို တဆုံး ထိ ထိုးသွင်းကာ ဆောင့်လိုးပေးနေ သည် .. ။ အင်း . .. ထိတယ်…ထိတယ် . .ပြီးတော့မယ် . .ဆောင့်ဆောင့်..နင် ယောင်္ကျား မဟုတ်ဘူးလား..လိုးလိုး ..ဆောင့်လိုး . .. အီစွတ်မှာ . .ဘီဘီ တအား တောင်းဆိုနေတာကြောင့် .. . .ဘိဘီ့ပေါင်တန်တွေကို ထမ်းပြီး . .ဒလစပ် လိုးဆောင့်ပေးတော့ ဘီဘီလဲ . .. အာ…အာ…အာ…အာ… ဆိုပြီး ကော့လန်သွား သည် . .။မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာ အကြာကြီး ညည်းနေ သည် . .။ ဘီဘီ သည် သူမ ပြီးသွားတာနဲ့ အီစွတ်ကို တွန်းပစ်လိုက် သည် . .။ အီစွတ်ရဲ့ လီးတန်ကြီး ဗွက်ကနဲ . .ဘီဘီ့ စောက်ခေါင်းထဲက ကျွတ်ထွက်လာ သည် . .။ အီစွတ်ကငါမပြီးသေးဘူး..ဘီဘီ…လို့မကျေမနပ်ပြောရင်း…မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ လီးကြီး နဲ့ ..ဘီဘီ့ကို ထပ်လိုးရန် ကပ်လာ သည် . .။ ဘီဘီက အီစွတ်ကို ဆောင့်ကန်လိုက် သည် ..။
အီစွတ်လဲ ..ကြမ်းပေါ်ကို ပက်လက်လန်ကျ သွားရ သည် . .။ ဘီဘီ ..နင်မကောင်းဘူးဟာ . .နင့်ကို ပြီးတဲ့အထိ ငါ …လိုးပေး… တိတ်စမ်း ..ခွေးကုလား ..နင်အခုထွက်သွား . . အီစွတ် သည် လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ တွေတွေကြီး ရပ်နေ သည် ..။ ဒေါသထွက် နေတဲ့ မျက်နှာ နီနီကြီး နဲ့ . . ငါ့ကို..မရက်စက်ပါနဲ့ဟာ .. . လို့ တောင်းပန်သလို ပြောလိုက် သည် .. ။ ဒီတော့မှ ဘီဘီလဲ .. ကဲ လာ ..လာ..ငါကစောက်ပတ်ကြည့် ပြီး ကွင်းထုလိုက် … ဆိုပြီး ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်ထောင်ကုန်းလိုက် သည် . .။ အီစွတ်လဲ . . ငါပြီးအောင်တော့ လိုးလိုက်ပါရစေဟာ . .ဆန့်တငန့်ငန့်ကြီးဟ .. လို့ ပြောရင်း …ဖင်ကြားက ပြူးပြူးကြီး စူထွက်နေတဲ့ ဘီဘီ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ..သူ့ လီးကြီးကို သွင်းထည့်လေ သည် .. ။ ဘီဘီလဲ..တဗျစ်တောက်တောက်… ..မကျေမချမ်း ရေရွတ် ရင်း . .အီစွတ်ကို.. ပေးလိုးလိုက် လေ သည် . ..။
အီစွတ်လဲ ..ဘီဘီ့ဖင်တုံးကြီးတွေကို ကိုင်ဆုတ်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးလေ သည် . .။ မကြာခင်ဘဲ အီစွတ် ..ပြီးသွား သည် . .။ သူ့လီးကြီးကို တဆုံးထိုးနှစ်ထားရင်း သုတ်တွေကို ဘီဘီ့စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်လိုက် သည် . ..။ အား…အင်း . .ကောင်းလိုက်တာ ဘီဘီ ရယ် . .. တော်တော့ စောက်ကောင်. .ဇိမ်ခံမနေနဲ့ . .သွား .. ငါ့အတွက် ဆိုင် က .. ထမင်းဟင်း သွားယူပေး . .ငါ အိမ်မှာ မချက်နိုင်ဘူး .. ဘာဟင်းနဲ့ . ..စားမှာလဲ . . လျာမရှည်နဲ့အီစွတ် . .မန်နေဂျာ ကို ပြောလိုက် .. ငါ့အတွက်လို့ . သူသိတယ် . အီစွတ် သူ့ ဘောင်းဘီ ကောက်ဝတ် သည် . . .။ ဘီဘီ သည် အီစွတ် ကားမောင်း ထွက်သွားသောအခါ ..အိပ်ရာက လူးလဲထ သည် . .။ ဘိုတောက် ကို လိုက်ရှာ သည် ..။ ဘိုတောက် မရှိတော့ ..။ ဘီဘီ လဲ ဘိုတောက် က သူ့ လင်ကြီး ချောက်ဒရီ့ကို သူမနဲ့ အီစွတ်အကြောင်း သွားတိုင်လိုက်မှာ စိုးရိမ်နေပြီ ..။
ဘိုတောက် ကို နုတ်ပိတ်မှ ဖြစ်မည် . .။ ဘီဘီ လဲ ရေမိုးချိုး ..အဝတ်အစားလဲ ပြီးနောက် အီစွတ် ယူလာပေးတဲ့ သူတို့ပိုင်သော ဆိုင် တဆိုင်က ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းကို စားသည် ။ အီစွတ် . .ဘိုတောက် တွေ့ခဲ့လား . . မတွေ့ဘူး..ဘီဘီ . . ဆိုင်၃ဆိုင်စလုံးကို ဖုန်းဆက်ကြည့်စမ်း . .ဘိုတောက် ဘယ်မှာလဲ သိချင်တယ် . .ငါ ခိုင်းစရာ ရှိလို့ . . ကောင်းပြီ..ဘီဘီ . .ဒါနဲ့ ငါ နဲ့ ဘီဘီ နဲ့ ဘယ်တော့ ထပ် …ဟိုဒင်း . . လျာမရှည်နဲ့ အီစွတ် . .နင့် စောက်ပါးစပ် ပိတ်ထား . . ဘိုတောက်. . . ဗျာ….ဘီဘီ . .. မင်း ဘီဘီ့ကို ရှောင်နေတာလား . . . မရှောင်ပါဘူး…ဘီဘီ . . မင်း . .ဘီဘီ အီစွတ် နဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ …ဘယ်သူ့ကိုမှ လျောက် မပြောစေချင်ဘူး ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. တကယ်လား . .မင်း နုတ်လုံမယ် ဆိုရင် ဘီဘီ က မင်းကို ဆုချမှာ . . ဗျာ….တကယ်လား . . .ဘာဆုလဲ ဘီဘီ . . . မင်းဘာလိုချင်လဲ ပြော ..မင်းလိုချင်တာ ..ဘီဘီ ပေးမှာပေါ့ . . တကယ်ပေးမှာလား . . တကယ်ပေါ့ ..ဘာလိုချင်လဲ ….ပြော.. . ဘိုတောက် က ဘီဘီ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး . . ကျနော်လိုချင်တာ . .ဘီဘီ… သိပါတယ်လေ . . လို့ ပြောလိုက်ပါ သည် . . . ။
ဘီဘီက ပြုံးစိစိ နဲ့ .. မသိဘူး . .. ဘာလဲ . .ပြောမှ သိမှာပေါ့ . .လို့ ပြောလေ သည် . .။ ဘိုတောက် လဲ ဘီဘီ့ နို့ထွားထွားတွေကို စိုက်ကြည့်ပြီး .. ဘီဘီ ..အီစွတ်ကို ကျွေးတာတွေပေါ့ . .ကျနော့်ကိုလဲ ကျွေးမလား . . လို့ ပြောလိုက် သည် .. ။ ဘီဘီလဲ .. ဘာတွေလဲ..ဆိတ်သားကဘတ်လား . . လို့ စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ပြောနေပြန် သည် . .။ ဘိုတောက်လဲဆိတ်သားကဘတ်မဟုတ်ဘူး… . .ဆိတ်သားကဘတ်ထက် အဆ၁၀၀ လောက်ပိုကောင်းတဲ့ ဟောဒီ ဘီဘီ့ နို့ကြီးတွေကို စို့ချင်တာ . .ဆို ပြီး ဘီဘီ့ နို့တွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ထိကာ ပြ သည် . .။ ဘီဘီ လဲ တခစ်ခစ် ရယ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ဝင်ပြေးပါ သည် . .။ဘီဘီ့ စွင့်ကားတဲ့ ဖင်တွေ ဟာ တုန်ခါ လွုပ်ရမ်းသွား တာ ဘိုတောက် တွေ့လိုက်ရပါ သည် . ..။ ဘိုတောက်လဲ ရုတ်တရက် ကြောင်နေပြီးမှ ဘီဘီ့အနောက်က ပြေးလိုက်သွားပါ သည် . .။ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ဘီဘီ သည် မှောက်ရက် အိပ်နေတာ ဘိုတောက် တွေ့လိုက်ရ သည် . .။
ဘီဘီ . . . ဟိတ်ကောင်လေး . .အိပ်ခန်းတံခါး ကို ဂျက်ချလိုက်ကွာ . . ဘိုတောက် တံခါးဆီကို ပြေးသွား သည် . .။ ဘီဘီ့ကို လိုးရတော့မည် ဆိုတာ သူ သိလိုက်ရတာနဲ့သူ့ပေါင်ကြားက ဖွားဖက်တော် လီးတန်က ဘန်းကနဲ ထောင်ထ လာလေ သည် . .။ ဘီဘီ့အနားကို ပြန်ရောက်လာသောအခါ ဘီဘီက .. ပြစမ်း . .မင်းလေး . .ရဲ့ ဒုတ် ကို ကြည့်ချင်တယ် . .. ဆိုပြီး ဘိုတောက်ရဲ့ လုံချည်ကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲ ချွတ်ချလိုက် ပါ သည် . .။ အို…အာပါပါ . . ဘီဘီ မျက်လုံးတွေ ဝိုင်းစက် ..အရောင်တောက်ပ သွားကြ သည် . .။ မြန်မာလီး လဲ ကုလားထက် မလျော့တာ ဘိဘီ တွေ့သွားပြီ . .။ ဘိုတောက် ရဲ့ လီးဟာ အီစွတ် ရဲ့ လီးတန်ကြီး လိုဘဲ တုတ်လဲတုတ် ..ရှည်လဲ ရှည် နေတာ ဘီဘီ တွေ့လိုက်ရပေ သည် . .။ ဘိုတောက်လို ကောင်လေးမှာ ဒီလို လက်နက်ကြီး တပ်ဆင်ထားနေတာ ဘိဘီ မသိခဲ့ …။ အသိနောက်ကျလေ ခြင်း . . .။
ဘီဘီက … လာစမ်း…ဒီအနား . . ဆိုပြီး ကုတင်ပေါ် ဘေးတစောင်း အိပ်ရင်း ခေါ် . သည် . .။ဘိုတောက်က ဘီဘီ့မျက်နှာအနားထိသူ့လီးတန်ကြီးကို …တိုးကပ်ပေးလိုက် သည် . ..။ နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး . .ဘိုတောက်ရယ် . . ဘီဘီ သည် ဘိုတောက် လီးကြီးကို မြင်ရုံနဲ့ ..သူမ စောက်ပတ်ထဲက တတုတ်တုတ် နဲ့..အရေတွေ စိမ့်ထွက်နေတာ ခံစားလိုက်ရပြီး . .တအားဘဲ ယား လာရ သည် ..။ သူမ နွုတ်ခမ်းနား တိုးကပ်ပေးလာတဲ့ ဒစ်ပြဲကားကားကြီး ကို စုတ်ချင်စိတ်တွေ တဖွါဖွါး ပေါ်ပေါက်လာပေ သည် . .။ သို့ပေမဲ့ ဘီဘီ သည် ..ဟန်လုပ်လိုက် သည် . .။ ကြောက်တယ်ကွာ. .သူ့ဟာကြီးက အရမ်းကြီးလဲကြီး ..ရှည်လဲ ရှည်တယ် . .. ဘိုတောက်လဲ အီစွတ်ကို လိုးဆောင့်ခိုင်းနေတာ သူ့မျက်မြင်မို့ဘီဘီ ….ဟန်လုပ်နေမှန်း သိလေ သည် . .။ ဘီဘီ့လက်ကို ဆွဲယူကာ ..သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ခိုင်းလိုက် သည် . .။
ဘီဘီ လဲ လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင် မိတော့ ..ကြက်သီးတွေ တအားထရပြီး ခံချင်စိတ်တွေ က ထိန်းလို့မရချင်တော့ . .။ ဘိုတောက် . .မင်း ဘီဘီ့ကို လိုးပေးကွာ . . . ဘီဘီ လဲ ဘိုတောက် ရဲ့ လီးကြီးကို လက်တဖက်နဲ့ အားမလိုအားမရ ဖျစ်ညှစ်ရင်း သူမ ထမိန်ကို ကျန်လက်တဖက်နဲ့ လှန်တင်လိုက်ပါ သည် . .။ ဘီဘီရဲ့ဖြူဝင်းတဲ့ ပေါင်တန်ရှည်နှစ်ချောင်း နဲ့ ပေါင်ကြားတဲ့တဲ့က ဖေါင်းမို့တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက် တဲ့အခါ တဏှာ စိတ်တွေ ဝုန်းကနဲ ထကြွ ရပြီး .. ဘီဘီ့ ပေါင်တန်တွေအကြား ခေါင်းထိုးစိုက်ခါ ..စောက်ဖုတ်ကြီးကို နှာခေါင်းနဲ့ထိုးဆွလိုက် ရွူလိုက် လုပ်နေသလို ..ပါးစပ်နဲ့ လဲ နမ်း စုတ် လေ သည် . .။ အ….အ….အ….အို .. . .အာ…အာ……အာ… ဘီဘီ ရဲ့ အော်သံ က ကျယ်လောင်လှ သည် . .. ။ ဘိုတောက်သည်..ဘီဘီ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို တပြတ်ပြတ် နဲ့ယက်ပါတော့သည် .. ။.ဘီဘီ့ဖင်တုံးကြီးတွေလဲကို ရေရေလည်လည် ဆုတ်နယ်ပစ်မိနေ သည် . .. ။ သူ ဘီဘီ့ကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ..စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်ခဲ့တာ ကြာနေပြီ …။ဘိုတောက် သည် သူ့လျာထိပ်ချွန်ချွန် နဲ့ ဘီဘီ့ စောက်ဖုတ် နွုတ်ခမ်းသားနှစ်မွာကို ထိုးခွဲကာ စောက်ခေါင်းထဲ ကို လျာထိုးသွင်းတော့ ဘီဘီ ဖင်ကြီးတွေ ဘယ်ညာ ရမ်းခါပြီး တဆတ်ဆတ် တုန် နေသည် . .။
လူးခါနေရသည်. .လင်ဖြစ်သော..ချောက်ဒရီကော..အီစွတ်ရော ဒီလိုတခါမှ စောက်ဖုတ်ကို မကလိပေးဘူးခဲ့ ..။ ဘာဂျာမှာ မြန်မာကောင်လေး က ကုလားများထက် သာသွားပြီ …. ။ အို . ပြောရင်းဆိုရင်း …ဘိုတောက် …သူ..သူ.. ဘီဘီ့စောက်စိ ကို လျာထိပ်လျွန်လေးနဲ့ ထိုးဆွ ကလိနေပြန်ပြီ . .အာ..ဟာဟာ… အင်….ဘီဘီ . .ကာမစိတ်တွေ ထကြွရတာ . .အခုဘဲ ဘိုတောက်ရဲ့ လီး အပေါ်မှာတက်ထိုင်လိုက်ချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာရ သည် . ..။ တော်…တော်ပြီကွယ် . . ဘီဘီ မခံနိုင်တော့ဘူး . .. ဘိုတောက် . . ဘိုတောက် သဘောပေါက်သည် . .။ ဘီဘီ အရမ်း ခံချင်နေပြီ …. ။ ဘိုတောက် လဲ ဘီဘီ့ကို ကုတင်စောင်းမှာ ပေါင်ဖြဲကားစေပြီး သူက ကုတင်အောက်မှ မတ်တပ်ရပ်လျက် အနေအထားနဲ့ ..ဘီဘီ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို သူ့လီးချောင်းကို သွင်းလေ သည် . ..။ အရေတွေ ရွဲနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ဗျိကနဲ လီးကြီး သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ဝင်သွား ရာ ဘီဘီ လဲ .. ဖြေးဖြေး ..ထိုးပါဟာ . . လို့.. ပြောရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ပိုပြီး ကော့ပေးလိုက်ပါ သည် . .။
တော်တော် လီးတုတ်တဲ့ကောင်ဘဲ ..ငါ့စောက်ပတ်ထဲ ..တင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်ကြီး ဖြစ်နေရအောင်ကို တုတ်တယ် . . .လို့ စိတ်ထဲ ဘီဘီ မှတ်ချက်ချနေဆဲ ..ဘိုတောက် လီးကြီး သူမ အဖုတ်ထဲ တဆုံး ဝင်လာ သည် .. ။ ဘိုတောက်ရဲ့..လမွေးကောက်ကောက်တွေ သူမရဲ့ ပြောင်နေတဲ့ ဆီးခုံကြီး ကို .. လာထိကပ်တဲ့အထိ..လီးတန်အရင်းအထိ ဝင်နေမိ သည် . .။ ဘီဘီ . .ခံနိုင်တယ်မဟုတ်လား . . လိုးတော့မယ်နော် . . ဘိုတောက် သည် အီစွတ် က ဘီဘီ့ကို လိုးပေးတာကို မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် ဘီဘီ ဘယ်လို ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ခိုင်းတတ်သလဲ သိနေသူမို့ ဘီဘီ့ ကို ခပ်ပြင်းပြင်း..လိုးချက်တွေနဲ့ လိုးပေးဖို့ ..စဉ်းစားထား ပေ သည် . .။
ဘီဘီက ခေါင်းညှိမ့်ပြပြီး . . ရတယ် . .လိုး..လိုး .. လို့ ပြန်ဖြေ သည် ..။ ဘိုတောက်လဲ ဘီဘီ ခံနိုင်လို့ကတော့ လိုးပြီဘဲ …။ ဘီဘီ့နို့ကော့ကော့ကြီးတွေကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး …အားရပါးရ လိုးဆောင့်ပါတော့ သည် .. ။ ဘီဘီလဲ ဘိုတောက် ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်တွေဟာ အီစွတ်ထက် အားပါတာ တွေ့ရသလို ဘိုတောက် သည် ငယ်ရွယ်သူမို့ ဆက်တိုက် ဒလစပ် လိုးနိုင်တာကိုလဲ တွေ့လာရ သည် . .။ အိုး…ဝေါင်း . ..အိုး…အား…..နဲ့ ဘီဘီ သဘောတွေကျနေပြီး သူမကလဲ အားကျမခံ အောက်မှ ပင့်ပင့်ပေးနေ သည် . .။ ကောင်းလား ဘီဘီ.. ကောင်းတယ်.. အရမ်း ..ကောင်းတယ် . . ဘီဘီ လဲ ကောင်းသထက်ကောင်းလာ သည်မို့ ပုံစံတွေဘာတွေပြောင်းမနေချင်တော့ . .။နောက်အချီတွေကျမှ သူမစိတ်ကြိုက် ပုံစံတွေနဲ့ လိုးတော့မည် လို့ ဘီဘီ.စဉ်စားလိုက်ပြီး ဘိုတောက် ကို အပီ ဆောင့်ခိုင်းလေ သည် . .။ ဘိုတောက်လဲ အားသွန် ကာ ဆွဲလေပြီ . .။
တဖန်းဖန်း ..အသားချင်းရိုက်ခတ်သံတွေ ပေါ်လာ သည် …။ ဖွတ် ..ဖွတ်..ဖွတ်…ဖွတ်……နဲ့ ဘီဘီ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ လီးကြီး ..ဒလစပ် ဆောင့်နေ သည် . . .။ အို…ဘိုတောက် . ..ဆက်တိုက် ဆောင့် ..နာနာလေး . .ပြီးတော့မယ် . ..ဆောင့် ဘီဘီ သဲသဲမဲမဲ အောက်ကနေ သူမဖင်ကြီးတွေကို စကောဝိုင်း မွေ့ရမ်းပေးနေ သည် . . .။ဘိုတောက် လဲ ဖြူဖွေး တောင့်တင်းတဲ့ ပထန် မ ကို လိုးခွင့်ရတာမို့ အားရပါးရကို လိုးဆောင့်ပစ်လိုက် ရာ ဘီဘီမှာ . .အထွပ်အထိပ် ကို တက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားရ ပြီး . .ကာမရဲ့ ကောင်းခြင်း အရသာ ကို ခံစားသွားရပါတော့ သည် ..။ ဆက်လိုး..ဘိုတောက် . .မင်းပြီးအောင် ဆက် ဆောင့် . .မင်းလဲ ပြီးလိုက်ပါ .. ဘီဘီ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာဘဲ ပြီးလိုက်ပါကွယ် . .. ဘိုတောက်လဲ ဘီဘီ ပြီးသွားပြီမို့ ..ထိန်းမနေတော့ဘဲ ဆက်တိုက် ဆက်လိုးဆောင့်ရင်း သုတ်တွေ ဘီဘီ့စောက်ဖုတ်ထဲ ဒလဟော ပန်းထုတ်ခါ ပြီးလိုက်လေ သည် ………ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လကျဆှဲတျော